ကြှနျတေျာ့ခဈြသူအတှငျးရေးမှူးမမ – My Blog
ကနြျော နိုငျငံခွားက ပွနျလာတော့။ အလုပျတှေ လိုကျလြှောကျတယျဗြာ…….မကိုလညျး လှမျးနာကြ..။နိုငျငံခွားမှာလညျး ဆယျနှဈကြျောလာတော့ ပငျြးလာ လို့ ဆိုပွီးတိုငျးပွညျ ပွနျလာခဲ့တာ။ နိုငျငံခွားက လစာရဲ့ သုံးပုံ ပုံ တပုံလောကျ ရရငျ လုပျမယျဆိုပွီး ဆုံးဖွတျထားတာ ခကျတယျဗြာ လစာတှကေ အတျော နညျးတယျ မွနျမာပွညျက လူတှကေို တကယျလညျး အံ့သွမိတယျ ဒီလောကျ ဈေးကွီးတဲ့ ကုနျဈနှေုနျးကို လစာနညျးနညျးလေးနဲ့ တောငျ့ခံထားတာ အတျော လေး ခြီးကွူးမိပမေယျ့ စိတျထဲကတော့ တကယျ ဂရုဏာ သကျမိတယျ။ ကံကောငျးတယျဘဲ ပွောရမလား မသိဘူး FDI ကုမ်ပဏီ တခုက မွနျမာပွညျမှာ invest လုပျပွီး ကုမ်ပဏီ အသဈတဲ့။ သှားပွီး အငျတာဗြူးလုပျတာ အောငျသှားတယျ အဓိကကတော့ အင်ျဂလိပျလို နညျးနညျး ပါးပါး ပွောတတျပွီး လုပျငနျး အတှအေ့ကွုံ အမြားကွီး ရှိလို့ပါ။ အမှနျအတိုငျး ပွောရရငျ ခနျ့မှနျးထားတဲ့ လစာထကျ ပိုမြားတယျ..။ အခွား Facility လညျးရသေးတယျ။ ကနြျောက လညျး နိုငျငံခွား ကုမ်ပဏီတှေ အကွောငျး နားလညျတော့…။ နယျကလူဆို အိမျ စီစဉျပေးမယျ ထငျပွီး တောငျးလိုကျတာ ရသှားတယျ။
ကားလညျး ပေးတယျ………ခကျတာက ကနြျော ကားမမောငျးရဲဘူးဗြ ရာထူးကတော့ Country Manager…ဆိုတော့ မွနျမာပွညျ အတှကျ အကွီးဆုံးပေါ့ဗြာအဲဒီ အခြိနျ ကနြေျာ့ အသကျက ၃၀ ဘဲ ရှိသေးတယျ။ဒီလိုနဲ့ ….ကနြေျာ့ အလုပျ အတှကျ Plan တှေ ဆှဲ…..ရုံးခနျးလညျး ရှာ. အလုပျကတော့ အရမျးရှုပျ ပေါ့ဗြာလူတှေ ချေါဖို့ အတှကျလညျး… ပွငျဆငျသတငျးစာထဲမှာ ကွငွောထညျ့ဂှငျကတော့ တကယျ့ဂှငျဘဲဗြာ။ ကနြျောကို ငှားပေးထားတဲ့ လုံးခငျြး အိမျမှာ ကနြျော တဈယောကျတညျးလေ…..။အငျတာဗြူးလုပျတော့ လာလိုကျကွတဲ့ လူတှေ အမြားကွီးဘဲဗြာ..။ကနြျောတို့ကုမ်ပဏီကလစာ ကောငျးတယျဆိုလို့ လာလြှောကျကွတာ….ဒီစာဖတျတဲ့ အထဲတောငျ ပါအုံးမလား မသိဘူး….. ဆောရီးပါဗြာ………. အဲဒီတုနျးက ကနြျော နှာဗူးကခြဲ့လို့ တခြို့ဆို တျောလြှကျ နဲ့ အရှေးမခံခဲ့ရဘူး။ စာလညျး ဖတျ ပညာလညျး ရအောငျ နညျးနညျး ရေးပွရငျးနဲ့ စာရှညျသှားမှာလညျး စိုးရိမျရတယျ။ဖွတျပွီးဘဲ ပွောလိုကျတော့မယျ ဗြာ…..။အဓိကကတော့ အတှငျးရေးမှူး အရငျ ရှာရတာဘဲ… ဒါမှ ကနြေျာ့ အတှကျ ဝနျပေါ့မှာ ဆိုတော့..။လာလြှောကျတဲ့ ကောငျမလေးတှကေို အကုနျမေး တယျ..။. မွနျမာဝတျစုံ ဝတျလာတဲ့ ကောငျမလေးတှေ…ရှကျတဲ့ ကောငျမလေးတှေ ဆို………ကနြျော အငျတာဗြူးလုပျတာ ဆယျမိနဈ မကွာဘူး…။ ခတျေဆနျဆနျနဲ့…အပွောအဆို ရဲတဲ့ ကောငျမလေးတှနေဲ့ဆို အငျတာဗြူး လုပျတာ ပိုကွာတယျ။
ဒီလိုနဲ့ နောကျဆုံး ဆယျခါတငျ ၅ ယောကျကို second အငျတာဗြူး ချေါလိုကျတယျ။မချေါခငျ စိတျ စမျးလိုကျတယျ..။ ကနြျော အလုပျမြားနလေို့ ဒီကို အငျတာဗြူး မတိုငျခငျ စနေ တဈရကျလောကျ လာကူပေးပါလားဆိုတော့..။ ခပျမိုကျမိုကျ ကောငျမလေး နှဈယောကျက NO တဲ့..နောကျ နှဈယောကျ ကတော့ အငျတငျတငျဘဲ..။ ကနြေျာ့ အတှငျးရေးမှူး ဖွဈလာမယျ့တဈယောကျကတော့ yes တဲ့။ သူက ပေးဆပျခွငျးနဲ့ စ လို့ ကနြျောသူ့ကို ၈၅ % ရှေးဖို့ ဆုံးဖွတျလိုကျတယျ…။ ဒီလိုနဲ့ ခြိနျးထားတဲ့စနနေေ့ ရောကျတော့….မမ ရောကျလာတယျ…။ ကနြျောလညျး အလုပျလြှောကျလာတဲ့ ဖိုငျတှထေဲကသူ့ရာထူးနဲ့ သူ အဆငျပွမေယျ့သူလေးတှကေို ရှေးထုတျခိုငျးတာပေါ့….။ မမက အရငျက HR မှာလညျးလုပျဖူးတော့ လုပျတာ မွနျတယျဗြာ……..နှဈနာရီလောကျ လုပျ လိုကျတော့ ပွီးသှားတယျ။ ဒါနဲ့ဘဲ အဲဒီအခြိနျကတော့ ………..ငှကေလညျး ပေါ တဈယောကျတညျး သမားဆိုတော့ ပိုကျဆံလညျး သိပျမနှမွောတတျဘူး လေ။မ က မနကျ အစောကွီး ရုံးကို ရောကျလာတယျ…….ကူညီပေးစရာရှိလုပျထားပေးရအောငျတဲ့…။ ဒီနလေ့ညျး မကို ကွညျ့ရတာ လှနတောဘဲ သတိထားမိတာက အပျေါက ကုတျအကြီလေးက မပွောငျးသှားဘူး ဘယျသူမှလညျး မရှိတော့ ……..မကို နမျးခှငျ့တောငျးပွီး ကဈစငျ ပေးလိုကျတယျ။
နောကျ အငျတာဗြူး စလုပျတယျ။ထုံးစံ အတိုငျး အတှငျးရေးမှူးတှေ လုပျရမယျ့ အသေးစိတျ အလုပျလေးတှေ ရှငျးပွတယျ နယျလညျး တခါတလေ သှားရ မယျ ညဘကျ ဒငျနာတှေ ဘာတှရှေိရငျ လိုကျတကျပေးရမယျ အပွောအဆို အမူအယာလညျး ရဲရငျ့ရမယျ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး နဲ့ လူမှု ဆကျဆံရေးလညျး ကောငျးရမယျ ဆိုတော့နှဈယောကျကတော့ နယျ မသှားနိုငျဘူးတဲ့ နောကျတဈယောကျကလညျး နယျတော့ သှားနိုငျပါတယျ။ သူ့အတှကျ မိနျးကလေး အဖျေါ ပါရငျတဲ့တဈယောကျတော့ အဈကို က လူမှု ဆကျဆံရေး ပှငျ့လငျးရမယျ ဆိုတာ ဘယျလောကျ ပှငျ့လငျးရမှာလညျးတဲ့ သူလေးလညျး ခဈြစရာလေးဘဲဒါနဲ့ သူနဲ့ စကားတှေ အမြားကွီး ဆကျပွောဖွဈတယျရာထူးအတှကျက မ အတှကျ လြာထားပွီးသား ဖွဈနလေို့ သူကို စိတျကနြေပျအောငျ စကားတှေ ထိုငျပွော ဖွဈတဲ့ သဘောပါဘဲ။ စကားပွောရငျးက သူက သူ့ ကလပျတှလေညျး တကျ နညျးနညျး ပှခေငျြတာလေးတှေ သိလာရတယျ….။ခဏနတေော့ သူနဲ့ စကား လကျစသတျပွီး ဒီအလုပျနဲ့ မဟုတျတောငျ အပွငျမှာ မိတျဆှတှေေ လုပျလို့ရတယျ ဆိုတဲ့ အကွောငျးရယျ ဒီည အတှကျ ညစာကြှေးမယျလို့ သူ့ကို ဒိတျလုပျ လိုကျတယျ။နောကျတော့ မ အလှညျ့ မနဲ့ကတော့ နညျးနညျး ရငျးနှီးပွီးသား ဆိုတော့ …..ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဘဲ ပွောဖွဈတယျ။
မ လစာ ဘယျလောကျ လိုခငျြလညျးဆိုတာ ညှိပေးမယျ….နောကျ မ အတှကျ လုပျရမယျ့ အလုပျသဘောတရားတှကေို သခြော ရှုငျးပွတယျ..။ကိုယျ့ရဲ့ဘေး မှာ ခဈြစရာ ကောငျးတဲ့ အတှငျးရေးမှူးမမလေး ရှိတာ အလုပျလုပျရတာ ပိုပြျောတယျဗြ တကယျပွောတာ လုပျငနျးခှငျ့ တိုးတကျခငျြရငျ………… ဘေးမှာ ကိုယျခဈြတဲ့ လူတှေ ရှိနရေငျ ပိုကောငျးတယျ။ ပွောစရာရှိတာ ပွောပွီး မကို မနကေ့ ဝယျထားတဲ့ ဖုနျးလေး ထုတျပေးတော့မ အရမျးပြျောသှားတဲ့ ပုံစံ လေး……….ပွီး မှ အားနာတဲ့ ပုံစံနဲ့…….မောငျလေးကလညျးကှာ အဲဒီလောကျကွီး မလိုသေးပါဘူးဟုတျဘူးလေ မရဲ့ အလုပျခနျ့လိုကျပွီဘဲ ကနြျောနဲ့ စကား အမွဲတမျး ပွောဖို့ အတှကျရယျဆကျသှယျရတာ လှယျဖို့ အတှကျရယျ ဖုနျးရှိမှ ဖွဈမှာလေ။ စကားသာ ထိုငျပွောနရေတာ မကို အခနျးထဲ ချေါပွီး ဆှဲခငျြ လှပွီ မကို ဖကျထားပွီး အခဈြအကွောငျးတှေ ပွောမိသေးတယျ ခဏနတေော့ ကဈဆငျ ထပျဆှဲပွိး နှဈယောကျလုံး လိုလားတဲ့ အရာကို စတငျလိုကျတယျ ကနြျောလညျး တခါမှ မလုပျဘူးသေးလို့ စမျးကွညျ့ခငျြနတော အလုပျစားပှဲပျေါ မတငျပွီး…သူ့ စကဒျလေး လှမျးပွီး ဂြာတဲ့ အရသာ တကယျကောငျးတယျ ဗြာ ပငျတီလေးတောငျ မခြှတျဘူး ဆှဲလှနျပွီး ဂြာတော့သာ မက လူသာ မခမျြးသာတာ သနျ့နတောဘဲဗြာ။ အဖုတျဖောငျးဖောငျးလေးကို ဆှဲဟပွီး အတှငျးသားလေးကို စိတျပါလကျပါ လြှာနဲ့ လြှကျပေးမှတော့ ဘယျခံနိုငျမှာလညျးးဗြာ ကနြေျာ့ ဆံပငျကို ဆှဲကိုငျပွီး မရဲ့ ခါးက ကော့ကော့တကျလာတာ အဲဒီ အခှကေို ခုထိ ပွနျကွညျ့ရငျးဖီးတကျနတေုနျးဘဲ နောကျတော့ ကနြျောလညျး မနနေိုငျဘူး သူ့ကို စားပှဲပျေါမှာဘဲ လိုးလိုကျတယျ ပထမ အစတော့ နာ တယျတဲ့ နောကျတော့ သူလညျး အရမျးကောငျးလာလို့နဲ့ တူပါတယျမက အရမျးအျောတယျ သိလား လုပျရငျ အျောတတျတဲ့ ဆျောတှကေို လိုးရတာ ပိုပွီး ဖီး လျရှိတယျ။
အဲဒီနကေ့ မှတျမှတျရရ သုံးခါလောကျ လုပျလိုကျတယျ ညနစေောငျးတော့ ထုံးစံ အတိုငျး ညစာ အတူသှားစားမယျ ဆိုပွီး မ ရဲ့ အိမျ အတှကျပါ ဝယျ ပေးလိုကျတယျ ဆိုငျမှာ မကို ဖုနျးသုံးပုံ သုံးနညျးလေး နညျးနညျး ပါးပါး ပွပေး အိမျထိ ပို့ပေးပွီးကနြျော ပွနျလာခဲ့တယျ။အိမျပွနျရောကျတော့မှ စျောလေးနဲ့ ညစာစားမယျလို့ ခြိနျးထးတာ သတိရပွီး သူ့ကို ဖုနျးဆကျ အလုပျမြားနလေို့ပါ ဆိုပွီး တောငျးပနျ အခုလာပွီ ဆိုပွီး သူ့ဆီ အမွနျ ပွေးသှားရတယျ။ သူက ဘဲကငျ စားခငျြတယျဆိုတော့နီးနီးနားနား.က ရှဘေဲမှာဘဲ သှားထိုငျလိုကျတယျ ဘဲကငျ တခွမျးမှာပွီး ကနြောကျ ဘီယာသောကျတော့ သူလညျး သောကျ မယျတဲ့ဒီကောငျမလေးကလညျး တျောတျော ခဈြစရာ ကောငျးတာဘဲနဲ့လညျး ကှဲသှားတာ သိပျမကွာသေးဘူး သူ့ဘဲက နိုငျငံခွား သှားလို့သာ ကှဲသှားတဲ့ ပုံစံ မြိုးပါ။ သူလညျး သောကျနိုငျသားဗြာတဈယောကျ သုံးလုံးလောကျ ကုနျတော့ကလပျ ကို ဆကျသှားမယျ ဆိုပွီး သှားကွတယျ။ ကနြျောက မကတတျဘူးဗြာ သူက ကခငျြတယျဆိုလို့ သူ့ကို လှတျပေးလိုကျပွီး ကနျြောက ပုလငျးထောငျလိုကျတယျ။ ထုံးစံအတိုငျး စားပှဲမှာ ပုလငျးထောငျထားပွီဆို မိနျးကလေး တှကေ လာထိုငျခငျြကွတယျလေ။ကနြျောလညျး ပငျြးတာနဲ့ လာထိုငျတဲ့ ကောငျမလေးနဲ့ တျောကီပှားနတေော့မရှခြေောက ရောကျလာပွီး ဝုနျးပါလရေော ဒါနဲ့ ကနြျောက……ခဈြလေးကလညျးကှာ ကိုကိုက ရိုးရိုးစကားပွောတာပါ စိတျမဆိုးနဲ့နျောဆိုပွီး ခေါငျးတှေ သပျပေးလိုကျတော့ ငွိမျသှားတယျ။ ဒါနဲ့ နှဈ ယောကျ ထိုငျပွီး ဆကျသောကျ ဆယျနှဈနာရီလောကျကမြှ ကဲခဈြလေး ဘယျပွနျမှာလညျး…… ကိုကို လိုကျပို့ပေးမယျဆိုတော့ ဒီအခြိနျမှတော့ အဆောငျ လညျး ပွနျဝငျလို့ မရတော့ဘူး ကိုကို သှားတဲ့ နောကျ လိုကျခဲ့မယျဆိုတော့ပွသနာက အဲဒီမှာ စတာ…………. driver ပါနတေော့ အိပျကို မချေါသှားခငျြဘူး လေ ဒီလိုလုပျ ခဈြလေး……ကိုကို ဟိုတယျမှာ အခနျးယူပေးထားမယျကားသှားထားပွီးရငျ ကိုကို ပွနျလာခဲ့မယျ ဒီလိုနဲ့ အပွနျလမျးကွမှ မ ကို ဖုနျးဆကျဖို့ သတိရတယျ။
ဒီအခြိနျကွီး ဆကျရငျလညျး မကောငျးပါဘူး ဆိုပွီး sms အတိုလေး လှမျးပို့လိုကျတယျအလုပျမြားနလေို့ ဖုနျး မချေါဖွဈတာ ..အိပျနပွေီလား ဆိုတော့ သူ့ဆီ က ခကျြခွငျး ဖုနျး ပွနျဝငျလာတယျ မောငျလေးဆီက ဖုနျးကို စောငျ့နတောတဲ့ ဒါနဲ့ သူ့နဲ့ ခဏဖုနျးမှာ ကွှပေေးတော့ ကားဆရာက ပွုံးစိစိနဲ့ ဒါနဲ့ driver ကို မုနျ့ဖိုး ပေးပွီး တက်ကစီနဲ့ ပွနျခိုငျးလိုကျတယျ။ကနြျောလညျး သူ့ထှကျသှားတာနဲ့ တံခါး ပိတျခငျြယောငျဆောငျ ၊ သူလညျး ပြောကျသှားရော ခဈြလေးဆီ ပွနျ ပွေးရတာ။ မောလို့ မောမှနျးတောငျ မသိဘူး ဇာကပျနတောကိုး ဟိုတယျလညျး ရောကျရော သူ့အခနျးကို ကမနျးကတနျး ပွေးရတယျ တျောကွာ အိပျပြျော သှားရငျ နကေောငျးသှားမှာ စိုးလို့လေ။ရောကျရောကျခငျြးတံခါးခေါကျတော့အထဲက ဘယျသူလညျးတဲ့ကိုကိုပါ ဆိုမှ ဖှငျ့ပေးတော့ သဘကျလေး ပတျထား သူရခြေိုးခနျးထဲမှာ မကျြနှာသဈပွီး ထှကျလာတာတဲ့ သူက ရယျဒီဆိုတော့ ကိုယျလညျး အဆငျသငျ့ဘဲပေါ့သူ့ကို ဖကျ.ကဈဆငျလေး ဆှဲပွီး ခုတငျပျေါ ပကျလကျ လှနျခိုငျးလိုကျတယျခဈြတျော ခဈြတဲ့ ပထမဆုံးမမ သငျပေးလိုကျလို့အခုဆို မနနေိုငျဘူးဗြာမဂြာရရငျ မပွညျ့စုံသလိုဘဲ။ သူက ပွောတယျမဂြာ ဘဲ လုပျရငျ ဖီးလျအပွညျ့လာဖို့ မလှယျဘူးတဲ့……..ခဈြတဲ့ စိတျကွောငျ့သာ လိုကျလြောပေးလိုကျရတာသူ့တို့ ဖီးလျ အပွညျ့ရဖို့ ဂြာပေးမှ ပိုကောငျးတာတဲ့။ သူက အမှေးလေးတှေ ရိပျထားတာဗအြမှေးရိတျထားထားလို့ ကွမျးရှရှနဲ့ကလညျး တမြိုး အရသာ ရှိတယျ။ အစိလေးကို စုပျပေးလိုကျအတှငျးသားလေး ကို လြှာလေးနဲ့ ထိုးလိုကျအပွငျ နှုတျခမျးကို ပှတျဆှဲလိုကျနဲ့အစိကို စုပျရငျ အရမျး မစုပျနဲ့နာတတျတယျခပျဖှဖှလေး စုပျပေးပွီး လြှလေးနဲ့ ပှတျပေးကွညျ့ ဘယျမိနျးမ မ တောငျ့မခံနိုငျဘူးခဏလေးနတေော့ သူ့ ဆတျကနဲ ဆကျကနဲ တှနျ့သှားပွီးပွီးသှားတယျ သခြောတယျ ဒီစျောလေး ဒီကိစ်စ အတှအေ့ကွုံနညျး သေးတယျဒါမှ မဟုတျ သူ့ဘဲက ကောငျးကောငျး ပွုစုတာ မခံဘူးတဲ့ သူဘဲ ဖွဈမယျဆိုတာ ဒတျထိ သိလိုကျပွီလေ။
ဒါနဲ့ သူဘေးနားမှာ ဝငျလှဲပွီး ကဈစငျ ဆှဲလိုကျ နို့အုံလေးခလြေိုကျနဲ့တဈယောကျတညျး အလုပျမြားနတေုနျး သူက ကြုနေျာ့ ကို ပွုစုခငျြတယျ ဆိုလို့ ခှငျ့ ပေးလိုကျတယျ။သူ မှုတျတာတေျာ့ တျောတျော ကောငျးတယျဗြာသူ့ဘဲကို လုပျပေးနကွေတဲ့သူ့ဘဲကတော့အပွုအစု ကနြေျာ့ လောကျ မကောငျးဘူး တဲ့ နောကျပိုငျး သူနဲ့ အရမျး ပှငျ့လငျးသှားမှ ပွနျပွောပွတယျ။ သူ့အဖုတျလေးကို ဒဈလေးနဲ့ ပှတျလိုကျ နို့လေးကို ဆှဲလိုကျနဲ့သူပွနျပွီး စိတျအရမျးပါလာအောငျ နူးတော့ သူခါးလေးက အလိုကျသငျ့လေးလီးကို လိုကျလိုကျ တညျ့ပေးတယျ မခံနိုငျတော့ဘူးဗြာအသာလေး ထညျ့ကွညျ့လိုကျတယျ…….. အိုး စီးနတောဘဲ ဗြာ။ကောငျးလိုကျတာစိတျထဲက ထငျ့ကနဲတော့ ဖွဈသှားတယျသူ့ထဲက အရညျတှေ ကနြတောတောငျ ကနြေျာ့ဟာ မခငျြေသှားဘူး.ဒါနဲ့ မှိနျးပွီး လိုးပေးရငျး ကသူက မွနျမွနျစောငျ့ပေးပါတဲ့ ကနြျောလညျး အားရပါးရ စောငျ့ပေးလိုကျတယျ။ အရမျးကောငျးတယျဗြာ သခြောသှားပွီသူပွီးသှားတော့ကနြေျာ့ကောငျ ကို ဆှဲစုပျနလေို့ ကနြျောလညျး မရှေးမနှောငျးဘဲထှကျသှားတယျ သူ့မှာ မြှော့ပါတယျဗြာ တကယျ့ ရှားပါး ပစ်စညျး။ကနြေျာ့ တသကျ လိုးပေးဘူးတဲ့ မိနျးမ တှေ ရာကြောနပွေီ နှဈယောကျဘဲ မြှော့ပါတာ ကွုံဘူးတယျ။ခဈြလိုကျတာ ခဈြလေးရယျစကားလညျး ပွော သူ့ကို ယုယုယယလေး ထှေးပှပွေီ့းနဖူးလေး ကို နမျးတော့သူ့ မကျြဝနျးမှာ မကျြရညျလေးတှေ တှဲနတေယျ။
ခဈြလေး ဘာဖွဈလို့လညျး ဆိုတော့သူ့ရညျးစားက သူ့ကို သစ်စာဖောကျသှားတော့ မခံခငျြတာနဲ့ သူလညျး ကနြျောနဲ့ အိပျလိုကျတာတဲ့အဲဒီကောငျ ဘယျလောကျ အသုံးမကလြညျး ဆိုတာ မသိဘူး……မြှော့ပါပွီး ဒီလောကျ ခဈြစရာ ကောငျးတဲ့ စျောကို ပဈသှားတယျဆိုတော့ တကယျ့ ငတုံးလို့ စိတျထဲ ကတော့ ကြိနျဆဲမိတယျ။ ခဈြလေးရယျ…..ကိုကို တဈယောကျလုံးရှိနပွေီဘဲ.မလေို့ကျတော့ကှာ ကိုကို က ခဈြလေးကို အမွဲခဈြနမှော ပါ ဆိုတော့သှားပါ တဲ့လူကို လုပျပွီးမှ ရညျစားစကား လာပွောတယျပထမ အငျတာဗြူး တုနျးကတော့ မကျြနှာသကွေီးနဲ့တဲ့ ရီလိုကျတယျ မိနျးကလေးတှေ ကိုယျ့ကို တကယျ ခဈြစခေငျြရငျ သူတို့ကို ရီအောငျ လုပျလိုကျ ဘယျလောကျဘဲ စိတျကောကျနတေဲ့ ခဈြသူ ဖွဈပါစဟောသတှေ ပွောပွီး ရီအောငျ လုပျလိုကျရငျ ပွနျကွညျ သှားတာ မြာတယျ။သူ့နဲ့ စကားပွောရငျးက ဗိုကျဆာတယျတဲ့ဟိုတယျကို လှမျးမေးကွညျ့တော့ မရတော့ဘူးတဲ့ သူက မရဘူးဗြာ……..ဇှတျဒါနဲ့ ဘယျမှ ဒီ အခြိနျ စားစရာ ရနိုငျမလညျး ဆိုတော့ သူက ..သိမျကွီးဈေးဘကျ မှာတော့ ရလောကျဆိုလို့ တက်ကစီ ဌားပွီး ပွနျထှကျခဲ့ရတသေးတယျကားပျေါရောကျတော့ ကနြေျာ့ ပုခုံးပျေါ ခေါငျးလေးတငျထားတဲ့ သူ့ကို ဖကျပွီးအဖုတျလေးကို ကားသမား မသိအငျော ထပျပှတျပေးသေးတယျ……….. ငါး မိနဈလောကျနတေော့ သူက လကျကို အတငျးဆုပျ.နား နားကို ကပျပွီး မွနျမွနျတဲ့ဘယျရမလညျးဗြာအမွနျလုပျပေးလိုကျတာတှနျ့ပွီး သူပွီးသှားတယျ။ သိမျကွီးဈေးနားမှာ ထမငျးကွျောစားပွီး..ဟိုတယျကို ပွနျရောကျတော့ ၁ နာရီခှဲတော့မယျ။တကယျ့ခဈြသူတှလေိုဘဲဟိုတယျရောကျတော့ ရခေဲသတ်တာထဲက ဘီယာထုတျ သောကျပွီးစကားပွောလိုကျဆကျဆှဲလိုကျနဲ့ . လေးခြီ လုပျဖွဈတယျလုပျတဲ့ အခြိနျတိုငျး ဆှဲစုပျထားတဲ့ သူ့အဖုတျလေးထညျက ပွနျတောငျ မထုတျခငျြဘူး ဗြာ စိမျလို့လညျး ကောငျးတယျတခြို့ အဖုတျတှဆေို စိမျလို့ မကငျေားဘူး ပူတယျ။
မနကျလငျးတော့လညျး လငျမယား ကနြတောဘဲ…….တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျ အနမျးတှနေဲ့ နိုးထပွီး……သူ့ကို တခြီလောကျ ခဈြပွလိုကျသေးတယျပွီး တော့မှ break fast တူတူ သှားစား…..ပွီးတော့ သူနဲ့ အတူ ဘုရားသှားဖူးလိုကျသေးတယျ။ကနြေျာ့ဘဝမှာ ထူးဆနျးတာက မိနျးကလေး နှဈယောကျရဲ့ အခဈြ ကို တပွိုငျတညျး ရတာမြားတယျအပွနျကွတော့ city mart ခဏဝငျပွီး ဝယျစရာ ရှိတာ ဝယျပွီး အိမျကို သူ့ကိုပါ ချေါလာခဲ့တယျ..။ နလေ့ညျစာ က သူက လကျစှမျးပွခငျြတယျဆိုလို့ သူ့ကို ခကျြခိုငျးလိုကျတယျ။ နောကျတခု ပွောရအုံးမယျကနြေျာ့ ခဈြသူတှကေို ကနြျောက ကိုယျတိုငျ အတှငျးခံ စိတျကွိုကျ ဝယျ ပေးလရှေိ့တယျ.ဗြ..ညနကေရြငျတော့ MK သှားပွီး သူ့အတှကျ ……. တခုခု ဝယျပေးအုံးမှဘဲ ဆိုပွီး…… စိတျကူးထားတာ တခါတလတေော့လညျး အဲဒီ ဘဝလေးကို ပွနျလှမျးသေးတယျ။ တယောကျတညျး ဆိုတော့ လုပျခငျြတိုငျးလုပျ ခြုပျခယျြမဲ့သူလညျး မရှိ ရညျးစားဆိုလညျး စိတျကွိုကျထားကနြျောစညျး တခုတော့ထားတယျသူမကွညျဖွူဘဲ ဘယျမိနျးကလေးမှ အတငျး မလုပျယူဘူး သူနလေ့ညျစာ ခကျြနတေုနျး အပွငျထှကျမနဲ့ ကွူ လိုကျသေးတယျ မက လညျး ဖုနျးရလို့ ပြျောနတောလသေူ့ အလုပျ အသဈရတယျဆိုတော့ သူ့ မိသားစုတှပေါ ပြျောနကွေတာ။မရဲ့ညီမလေးကလညျး တကယျ့ အငုံးလေးဗြ…… စားခငျြစရာလေးသူကပါ ဘေးက လှမျးဝငျပွောနတော တှတေ့ယျသူ့အမကေလညျး ထမငျး ဖိတျကြှေးခငျြလို့တဲ့။
တနလျာနေ့ ရုံးကို လာခဲ့ဖို့ ပွောပွီးမနဲ့ စကားဖွတျလိုကျတယျ။ ခဈြသူ ခဈြကြှေးတဲ့ နလေ့ညျစာ စားပွီးတော့တီဗှီလေးကွညျ့လိုကျသူ့အဖုတျလေးနိုကျလိုကျ နိုလေးခပြေေးလိုကျနဲ့တကယျပွောတာခဈြသူနဲ့ လှတျလှတျလပျလပျ အောကားကွညျ့ရတာ အရမျးကောငျးတယျသူ့တို့ဆီက ပညာတှေ အမြားကွီးရ ခဲ့လို့ ကနြေျာ့ဘဝမှာ မိနျးကလေးတှဆေီက အခဈြကို ရခဲ့တာလေ။ ခဈြလေး ဗှီဒီယိုထဲက အတိုငျး စမျးကွညျ့ရအောငျ ဆိုတော့ သူက အလိုကျသငျ့လေး ကုနျ ပေးတယျဆိုဖာပျေါမှာ မှောထားတဲ့ သူ့တငျလေးတှကေို ကိုငျပွီး နောကျကနေ ဂြာပေးလိုကျတယျ ပွီးတော့ သူ့ရဲ့ အဖုတျလေးထဲ လီးထညျ့ပွီး အားရပါးရ စောငျ့ပေးလိုကျတယျသူက သူ့ကွမျးမှ ကွိုကျတာသူ့အသားနာလာလေ…….သူက ပိုပွီး ဖီးလာလဘေဲအဲဒါဟာ စိတျရောဂါ တမြိုးဆိုတာ နောကျပိုငျး စာ တှေ ဖတျမှ သိရတယျ။ အဲဒီလို စျောမြိုးက သူ့ကို ယုယပွီး နုနုရှရှ ခဈြပွတဲ့ ဘဲတှေ ဆို အသမေုနျးသှားတယျ။ကနြျောလညျး သူ့တငျပါးကို ရိုကျလိုကျလိုး လိုကျ ကောငျးလညျးကောငျး.နို့ကို ဆှဲလိုကျ လိုးလိုကျနဲ့ ခေါငျးလေးကို လှမျးကိုငျတော့ဆံပငျပါ ဆှဲပွီးလုပျတဲ့.ခပျကွမျးကွမျးလေးဒါနဲ့ လကျတဖကျက ဆံပငျ ဆှဲပွီးတဖကျက ဖငျကွီး ကိုငျပွီး စောငျ့တာ……. အသားခငျြးရိုကျသံက အရမျးမိုကျတယျ။ ကိုလညျး သူ့ကောပေးနတောကို ကွညျ့ပွီး ပိုပိုပွီး ဖီးလာတယျ။ ဒါနဲ့ လကျတဖကျကို တံတှေးဆှတျပေးပွီး ဖငျခေါငျးလေးပါ ခြဲ့ပေးတော့အို ကောငျးလှနျးလို့တဲ့ မွနျမွနျ လုပျပါ ဆိုတာ ခညျြးဘဲ ဒါနဲ့ ဆယျမိနဈလောကျ ကွ တော့ ပွီးသှားတယျ……သူနဲ့ ပွီးတိုငျး ကနြျော ခကျြခွငျး ဆှဲမထုတျဘူးသူစှဲစုပျတာလေးကို ခံလို့ကောငျးလို့။ခဏနတေော့ မဆီက ဖုနျးလာတယျ…….ညနေ လာချေါပါလားတဲ့ တှခေ့ငျြလို့တဲ့။ အငျး လာမယျပွောပွီး ဖုနျး အမွနျ ဖွတျလိုကျရတယျ.ခဈြလေး သိသှားမှာ စိုးလို့ ကနြျောက ခဈြလေးကို ခဈြလေးကို တော့ ကိုကို မခိုငျးရကျဘူးကှာသငျတနျးထကျတပျလိုကျ……ကိုကို ထားပေးမယျခဈြလေး အလုပျ မလုပျနဲ့အုံးဆိုတော့ သူကလညျး အိုကတေဲ့ ။သူ့ကို အဲဒီ အခြိနျက နံမညျကွီး management လို ဖွဈနတေဲ့ ABE advance diploma တကျခိုငျးလိုကျတယျ။အဲဒီနောကျပိုငျး သူနဲ့ ကနြျော တဈပါတျကို နှဈရကျ လောကျတော့ လုပျဖွဈကွတယျ။
ကနြျောက ကနြျောခဈြတဲ့ မိနျးကလေးတိုငျးကို ပိုပွီး အောငျမွငျစခေငျြတယျဒါကွောငျ့ သူတို့ လိုအပျတာ မှနျသမြှ ထောကျပံ့ပေးခငျြတယျဗြာ ကိုယျတတျနိုငျ တာ ဆို သူ့တို့ကို လုပျပေးလိုကျတယျ။ခဈြလေး ဝငျရှုပျသှားတာနဲ့ မမနဲ့ ဇတျလမျး နညျးနညျး ပွတျသှားတယျ။မမ ဖုနျးချေါထားလို့ ညနေ ပွေးတော့မယျ ဆို တော့ သိတဲ့ အတိုငျး ကားမမောငျးတတျတဲ့ ကနြျောက ကားကွီးကို ထားပွီး တက်ကစီနဲ့ ပွေးရတာပေါ့သူတို့ လမျးထိပျရောကျတော့သူ့ကို ဖုနျးဆကျရသေး တယျ။ ထုံးစံအတိုငျး လမျးတှမှော လမျး ဆိုငျးဘုတျက ရှိတာ မဟုတျဘူးအိမျနရေငျး ဝတျစုံလေးနဲ့တောငျ မက ထငျးနတောဘဲ….ကမနျးကတနျး ထလာတာ ဖွဈမယျဆံပငျလေး ဘိုသီဘတျသီ ဂါဝနျလေးနဲ့မ က သူ့အိမျကို ချေါသှားပွီး မိတျဆကျပေးတယျသူ့အလုပျက ဆရာပေါ့သူ့အမနေဲ့ အဖှားကအံ့သွလို့မရဲ့ ဆရာဆိုတော့ အဖိုးကွီးလို့ ထငျနတောတဲ့ငယျငယျလေးနဲ့တျောလိုကျတာဆိုတော့နညျးနညျးတော့ ရှကျတာပေါ့ဗြာဟဲဟဲသူ့အမနေဲ့ အဖှားကို စကားတှေ အမြားကွီးပွောဖွဈခဲ့တယျ။ အမြားစုကတော့ သူတို့ ပွောတာပါ မ ရဲ့ အဖေ သပွေီး နောကျပိုငျး မ ကိုဘဲ အားကိုးနရေတယျ ဆိုတဲ့ကိစ်စရယျ ကုနျကစြရိတျ က ကွီးလာလို့ စားဝတျနရေေး ကပျြတညျးတယျ ဆိုတာ ဒါနဲ့ ကနြျောကလညျး မ အနနေဲ့ အခုဆို လစာ ငါးရာကြျောလောကျဆိုတော့ငါးသိနျး နီးပါလောကျ ရ မှာပါအခွား အပိုတှေ ဘာတှနေဲ့ ဆို ခွောကျသိနျးလောကျတော့ ရလိမျ့မယျဆိုတော့ ကြေးဇူးကွီးပါတယျ မောငျရငျရယျတဲ့သူတို့ အိမျမှာ ထမငျးစားဖို့ ချေါနေ သေးတယျ။သူတို့ မိသားစု စားဖို့ ခကျြထားတာလေး ကနြျောစားလိုကျရငျ သူတို့ ကိုယျတာ လြော့သှားမှာ သိလို့ ဗိုကျမဆာသေးဘူးဆိုပွီး အတငျးငွငျးခဲ့ရ တယျကနြေျာ့ဘဝက ငယျငယျက အရမျး ဆငျးရဲတယျ ဆိုတာ သူတို့ကိုတော့ မပွောပွခဲ့ဘူး။မကို ပွနျတော့မယျဆိုတော့ မကပွနျလိုကျပို့ပေးမယျတဲ မောငျဒီ နေ့ မ ကို မနမျးရသေးဘူးနျော လူလညျး မလဈဘူးတဆိုငျဆိုငျသှားရအောငျတဲ့မကလညျးကှာ ဆိုငျမှာဆို မလှတျလပျဘူးဟိုတယျ ခဏသှားမယျလဆေို တော့ သဘောဘဲ လို့ ဆိုတာနဲ့ ကားဆရာကို အနီးဆုံး ဟိုတယျကို ပို့ခိုငျးရတယျ။
ဟိုရောကျတောက တဆကျရှငျ ယူပွီး.ကနြျောက ဘီယာသောကျ..မက အအေးသောကျ စကားပွောလိုကျ နဲ့ နညျးနညျး အရှိရလာတော့မှ မကို နူးပွီး တခြီ လျောက ဆှဲလိုကျသေးတယျ.နလေ့ညျက လုပျထားလို့လား မသိဘူး….တျောတျော ကွာတယျဗြ မရဲ့ အသံဆို….အပွငျက သခြောပေါကျ ကွားလောကျ တယျ။မကို လညျး ခဈြတယျခဈြလေးကိုလညျး ခဈြတယျမ ညီမလေးလညျး ခဈြမိနမေလား မသိဘူး အဲဒီကောငျမလေးကလညျး မကျြလုံး အရမျး ကစား တယျ။ ည ၈ နာရီလောကျ ကတြော့ အပွငျထှကျ တခုခု စားပွီး မကို လမျးထိပျအထိ ပွနျလိုကျပို့ပေးလိုကျတယျ အိမျအပွနျလမျးကွမှ ခဈြလေးကို သတိရ တော့ ဖုနျးထဲမှာ သူ့ miss call တှေ အမြားကွီးဘဲsms လညျး ပို့ထားသေးတယျ ဒီလောကျချေါနတောတောငျ ဖုနျးမကိုငျဘူးနျောတဲ့ဒီလိုပါဘဲ လိုခငျြတာ ရ တော့ဆိုတော့ သူ့ကို မနညျးပွနျခြော့ရသေးတယျ။ လုပျငနျးခှငျ ဝငျတော့မှ မရဲ့ အစှမျးအစကို ပိုသိလာရတယျ သူက ရာထူးကွီးကွီး မလုပျဘူးပမေယျ့ အလုပျလုပျတာတော့ အတျောလေး စစေ့ပျတယျ အတှငျးရေးမှူးး သငျတနျးလညျး တကျခိုငျးအင်ျဂလိပျစာလညျး တကျခိုငျး သူလညျး အရမျး ပငျပနျးပါတယျ။ ကောငျးကငျေးတောငျ မနားရရှာဘူး။လူမိုကျ ကံကျောငးတယျ ပွောရမလား မသိဘူးဗြာ နပွေညျတျောမှာ တငျဒါ တငျတာ ကနြေျာ့ တို့ ကုမ်ပဏီက အလုပျ ကွီး တခုရတယျ။ထုံးစံ အတိုငျး ခိုငျးလို့ ကောငျးတဲ့ ခိုငျးနှားတှဆေို အသဲအသနျခြီးမှမျးကွတာပေါ့အလုပျလုပျတာ ခွောကျလတငျော မပွညျ့သေးဘူး projects ကွီး ရတယျ ဆိုပွီး ကနြေျာ့ဆီ အီးမေးတှေ ပို့ပွီး ခြီးမှမျးကွတယျ။ကိုယျလိုခငျြတာက လစာ ဒီထကျ ပိုလိုခငျြတာလစေပှနျဆာက နှဈယောကျ တောငျ ပေးထားရသလို ဖွဈနတော အမေ အတှကျလညျး ရှိသေးတယျ။
နောကျ တပါတျလောကျ ကွာတော့ အလုပျကိစ်စ စာခြုပျခြုပျဖို့ ဟိုက regional director ဘုတျ အဖှဲ့လာကွမယျဆိုတော့ ပို အလုပျရှုပျတာပေါ့.နပွေညျသှား ဖို့ ကားဌားရ..ဟိုမှာ ဟိုတယျ စီစဉျရသူတို့ကို Park royal မှာဘဲ ထား လိုကျတယျ။လဆေိပျသှားကွိုပွီး အပွနျလမျးမှာဘဲ မငျး အလုပျလုပျတာ တျောလို့ ဒို့ အဖှဲ့က မငျးကို လစာ ၁၀၀၀ တိုးပေးလိုကျပွီ ဆိုတော့ ပိုပြျောပေါ့ဗြာ။ သူတို့ကို ထားခဲ့ပွီး ပွနျအလာ ကားပျေါမှာ မ က…. ကနြေျာ့ကို ကွညျ့ပွီး အားကလြို့ တဲ့ စိတျကောငျးထားလို့ ကံကောငျးတာ ဆိုပွီး လူကွီးလသေံနဲ့ ပွောသေး မ အိမျလိုကခဲ့ကှာ…..တူတူ မအိပျရတာ ကွာပွီ အိမျကို နယျခရီးသှားရမယျလို့ လှမျးပွောလိုကျ ဆိုတော့သူက မညာခငျြဘူးတဲ့ ဒါပမေယျ့ သူလညျး တူတူ နခေငျြတော့Yes ဆိုတော့ . city mart မှာ သူ့ကို ထားခဲ့ပွီး driver ကို ကိုယျက လိုကျပို့ခိုငျး ပွီးတော့ city mart ပွနျသှား…….အလုပျကို ရှုပျနတောဘဲ။ ညဘကျရောကျတော့ ထုံးစံ အတိုငျးပေါ့ဗြာ ဒီညက ပိုမိုကျတယျဗြာ ကနြျော စမျးခငျြ တဲ့ ဆေးကို စမျးကွညျ့တာလေ။ ယောကျလြေး သဘာဝ video တှေ အကွညျ့မြားလို့လား မသိဘူး ဗှီဒီယိုထဲက ကောငျတှေ ဆေးထိုးထားတဲ့ ပုံစံတှေ မွငျ ရငျကိုယျ့ဟာကိုယျ သေးနသေလို ခံစားရလို့အမွဲတမျး ပိုပို ကွီးခငျြနတော နိုငျငံခွားက သူငယျခငျြးပွနျလာလို့ သူဝယျလာတဲ့ ဆေးလေး သောကျလူ ဆေးလေးနဲ့ စမျးကွညျ့ခငျြနတော။ သူတို့ဆီမှာက တရားဝငျ ရောငျးတာလေ အကြိုး အာနိသငျကော .ဘေးထှကျ ဆိုးကြိုးကော သခြော ရှငျးပွပွီးရောငျး တာအခု city mart မှာ ရောငျးနတေဲ့ X Man ဆိုတာ ဈေးကလညျး ကွီး effect ကလညျး ဘာမှ ကောငျးတာ မဟုတျဘူး နိုငျငံခွား website ထဲ ဝငျရှာ ကွညျ့လိုကျ ။ top 100 ဆေးထဲတောငျ ပါတာ မဟုတျဘူး ၂ ဘူးကို ၉.၉၀ USD ဘဲ ရှိတာဒီမှာက သုံးသောငျးခှဲကြျောနဲ့ ရောငျးတယျ။
သူငယျခငျြးတှနေဲ့က ပှဖေျော ပှဖေကျဆိုတော့ အလိုကျသိတယျလေ။အဲဒီနကေ့ မကို ဒီဆေး အစှမျးနဲ့ ခဈြပေးမယျလို့ စိတျကူးပွီး သူ့ကို city mart ဝငျချေါ ဟိုရောကျတော့ Vodka နဲ့ အခြိုရညျလေးတှေ ဝယျပွီး ကောကျတေး စပျသောကျမယျ စိတျကူးထားတ သောကျဆေးကတော့ ကွိုပွီး သောကျထားလိုကျ တယျ လူးဆေးကိုလညျး နာရီဝကျလောကျ ကွို လူးထားတယျ။ သောကျဆေးကတော့ ခကျြခွငျး အစှမျး မပွဘူး လူဆေးကတော့ စှမျးတယျဗြာလူထားတာ ငါးမိနဈဘဲရှိသေးတယျ ပူရှိနျးရှိနျးနဲ့ အစှမျးပွလာပွီ တငျးပွီးမာလာတော့ ပိုရှညျလာတယျ ထငျရတာပေါ့။ မအတှကျ ကောကျတေး ဖြျောပေးရငျးမီးဖိုးခြောငျ ထဲ တခြီလောကျ ဆှဲမယျ စိတျကူးထားတာ အိမျနရေငျးမို့ သဘကျလေး ပတျထားတဲ့ သူ့ကို နောကျ သိုငျးဖကျပွီး နို့လေးတှေ ခြေ ဆံပငျလေးကို နမျးလိုကျ နားရှကျလေး စုပျလိုကျ လညျးပငျးလေးကို ကဈဆငျဆှဲပေးလိုကျနဲ့သူက ဖငျကွီးကို ကော့ကော့ပေးတယျ။ ကနြျောလညျး လီးကို ဖငျနှဈလုံးကွားထဲ တညျ့ ထားပွီး ဆကျနမျးတယျကာငျးတယျဗြ ကားပျေါမှာ ထောကျရသလိုမြိုးဘဲ။သူလညျး အရှိနျရ ကိုယျလညျး အရှိနျရရော….သူက ကနြေျာ့ကောငျလေးကို မှုတျ ပေးမလို့ဆေးလူးထားလို့ မမှုတျခိုငျးတော့ဘူး။သူ့ကို ကုနျးခိုငျးပွီး နောကျကဘဲ ဆှဲထညျ့လိုကျတယျ။ဆေးကောငျးရငျ လီးက မာပွီး ပိုသနျလာတယျ။
သူကတောငျ ပွောသေးတယျ မောငျလေးဆေးက ကွီးဆေးလားတဲ့…ဟိုနထေ့ကျ ပိုကွီးနသေလိုဘဲတဲ့ သူလညျး မလုပျရတာကွာလို့ ထငျတယျ စကား တောငျ သိပျမပွောနိုငျဘူး လီးဝငျပွီး ဆောငျ့လိုကျတာနဲ့ အောကျလိုကျတာ ဗှီဒီယိုထဲက အတိုငျးဘဲ။တကယျ လိုးလို့ကောငျးတယျဗြာ မီးဖိုခြောငျထဲမှာ ပုံစံ အမြိုးမြိုးနဲ့ လိုးရတာ အရမျး အရသာရှိတယျ။ တျောတျောနဲ့ မပွီးနိုငျဘူး ဆေးကောငျးဝါးကောငျးဆိုတာ အဲဓီလို အစှမျးပွတယျ။သူ နှဈခြီပွီ့းပီတဲ့ကိုယျ က ဆှဲလို့ကောငျးတုနျး မောငျလေး မွနျမွနျ ပွီးတော့မ မခံနိုငျတော့ဘူး ဆိုမှာ သူ့ကို ပွနျဂြာပေးပွီး ဖီးလာအောငျပွနျသှငျး ပွီးမှ သူ့ကို အပျေါက တကျဆောငျ့ ခိုငျးတယျသူအပျေါက တကျဆောငျ့တဲ့ အခြိနျ နို့လေးတှေ ခပြေေးလိုကျ….ဖငျကွီးကို ညှဈလိုကျနဲ့ ငါးမိနဈလောကျကွတော့.နှဈယောကျလုံး တူတူ ပွီးသှား တယျ။ ကနြေျာ့ သုတျရညျတှေ သူ့အဖုတျထဲ ပနျးထညျ့လိုကျတဲ့ အရှိ အတျောပွငျးလို့နဲ့ တူတယျ သူ့အဖုတျလေးက ပှစိပှစိနဲ့ ဆှဲဆှဲညှဈသလို ခံစားရတယျ။ ကောငျးလိုကျတာဗြာ။ပွီးတာတောငျ ကိုယျ့ကောငျက မကသြေးဘူး။သူက ကနြျာ့ လီးကွီးကို ဆှဲကိုငျပွီး လူဆိုးတဲ့ ခုထိ မငွိမျသေးဘူးဆိုဘဲ သူနဲ့ ကနြျော ကောကျတေးလေး သောကျလိုကျ…အမွီးလေး စားလိုကျအောကားလေး တူတူ ကွညျ့ရတာ သိပျအရသာရှိပေါ့နှဈယောကျသား သဘကျလေးဘဲ ပတျထား တာ ဆိုတော့ကိုယျ့ဟာကို သူက စပွီး လာမှုတျပေးတယျ။ ဆေးကောငျးတာ သုံးတဲ့ အခါ အကွောတှကေပိုသနျလာပွီးဒဈကွီးက ပိုကွီးလာသလိုဘဲ အဲဒီ ထောငျလာတဲ့ အကွောတှကေ စျော အမွှေးပါးလေးတှကေို ဆှဲဆှဲ ပှတျသှားလို့ သူတို့လညျး ပိုပွီး ဖီးလျရှိတယျလေ။သူ့နှာခေါငျးလေးတှေ ရဲတှတျ…… မကျြလုံးလေး မှိတျပွီး ဆံပငျလေးကို လကျတဖကျက လှနျ..ကနြေျာ့ဟာကို တဖကျက ကိုငျပွီးအားရပါးရ စုပျပေးနတေဲ့ မကို ပိုခဈြလာတယျဗြာ။ အဲဒီညက မှတျမှတျရရ ကနြျော သူ့ကို ၇ ခါ ဆှဲဖွဈလိုကျတယျ။ မနကျလငျးခါနီးမှာ နှဈယောကျသား အိပျပြျောသှားတာကနြျောဆို အိပျယာကလညျး နိူးရောဒူးတှေ တငျေ ခငျြေတယျဗြာဒါကွောငျ့ ကိုယျဒူးကိုယျခြှနျသူမြားဆိုပွီးပျေါလာတာ။တခု ပွောပွအုံးမယျ မိနျးကလေးတှေ ပီးသှားတဲ့ အခါ သူ့တို့ မကျြနှာလေး တှကေ ခကျြခွငျး ခြောငျကွသှားတာနှဈခါလောကျပွီးတဲ့ မိနျးကလေးဆို.သိပျသိသာတယျကိုယျ့စျော ပွီးလား မပွီးလား သိခငျြရငျ………… မခခြငျနဲ့ ခပြွီး သူ့မကျြနှာလေး ယှဉျကွညျ့။၇ ခါမှ ဆယျခါလောကျ ပွီးထားတဲ့ မရဲ့ မကျြနှာလေးဆို ခြောငျကွနတောလေ။
မရေ ထတော့.ညနေ ဒငျနာ သှားရအုံးမယျဆိုပွီး နှဈယကျေသား နလေ့ညျစာ သှားစား ပွီးတော့ အိမျမှာ နားပွီး လေးနာရီလောကျကတြော့ driver ကို ဖုနျး ချေါparkroyal ကို ပွနျပွေးရတယျ။BOD အဖှဲ့က လူတှကေို ဒျေါစောရီမှ မွနျမာစာ လိုကျကြှေး တျောကီဖုတျပွီး မနကျဖွနျ နပွေညျတျော ခရီး အတှကျ ရှငျး ပွ။ အပွနျကြ သူတို့ကို park royal ပွနျပို့ပေးပွီးမနဲ့ ဈေးထှကျဝယျ MK မှာ မ အတှကျ one set လေးတှေ လိုကျဝယျပေးတယျ။မိနျးကလေးတှဟော တကယျခဈြလာရငျ ကနြျောတို့ထကျ ပိုသတ်တိရှိတယျ။ အဝတျလဲခနျး တံခါးလေး ဖှငျ့ပွီး မောငျ လှလားတဲ့ သုံးခါလောကျ အဝလိုးပွီးမှ ကနြေျာ့ကို မောငျလို့ သူက စချေါတယျ….ဒါတာငျ ပြျောနလေို့ သတိလကျလှတျဖွဈပွီး ချေါတာ ဖွဈမယျ။သူတံခါးဖှငျ့လိုကျတော့………. အပွငျကလူတှေ လှမျးမွငျနိုငျတယျလေ ဒါပမေယျ့ ဂရုမစိုကျဘူးဗြာ လှတယျမရေ ပွနျပိတျတျောကွာ လူမွငျကုနျအုံးမယျဆိုပွီး မနညျးပွနျပိတျခိုငျးရတယျ။ အပွနျကတြော့ သူ့ကို ပွနျပို့ပေးပွီး အိနွ ရရ ပွနျလာရတယျ.။ ကိုယျလညျး တကယျ မစှမျးနိုငျတော့ဘူး ဆေးကောငျးခကျြက အောကျက ကောငျက အခုထိ မာတောငျနတေုနျးဘဲ။ ခဈြလေးကို သတိရလို့ တျောကီပှားလိုကျသေးတယျသူလညျး သငျတနျးတှတေကျနတောရယျရညျးစား အသဈရယျနဲ့ ရှု့ပျနမှော…..လို့ တှေးမိရငျး ပွုံးမိသှားသေးတယျ။
မ က အရမျးခဈြဖို့ ကောငျးတယျဆိုတာ…..ပိုပို သိလာရတာ လူသဈတှေ ခနျ့လိုကျတဲ့ အခြိနျမှာဘဲကနြျောတို့ ရုံးက projects ရပွီဆိုတေ့ လူတှေ အမြားကွီး ချေါရမှာလေ နပွေညျတျောက ပွနျလာကတညျးက အဲဒီကိစ်စ စီစဉျနရေတာ……အရငျက တငျထားတဲ့ CV ထဲက လူတှကေို အငျတာဗြူး ပွနျချေါမလို့ လုပျနေ တုနျးသူက လှမျးနောကျတယျမောငျရမေလှတာဆို မ ဖယျထားလိုကျပွိနျောတဲ့။ သူဘဲ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ စားရေးမလေးတှေ ချေါပေးတယျ အငျဂငျြနီယာ မ တှေ အမြားစုကတော့ သိပျမလွှကွဘူးတဈယောကျဘဲ…….တျောတျောလှတယျအဲဒီတျောတျောလှတဲ့ ကောငျမလေးကတော့ ကနြျော ခကျြခွငျး ခနျ့လိုကျ တယျ အဲဒီလို ဘူးကတြာကနြေျာ့က သူ့ကို ခနျ့တယျဆိုတာ ကှနျဖနျးပေးတော့ မကျြနှာလေးမဲ့ပွီးဒီကောငျမလေးကို ကတြော့ ခကျြခွငျး ခနျ့တယျ…..မကိုကြ တော့ နှဈခါတောငျ ဗြူးတယျတဲ့.ဆေးလိပျလေးကိုငျပွီး ကနြေျာ့ နှာခေါငျးနား လာကပျတယျ။ ခဈြစရာ ကောငျးတဲ့ မ အမူအရာမွငျတော့ညီလေးက မနေ နိုငျဘူးမမောငျ့ကိုစုပျပေးပါလား.နောကျတဈယောကျ မဝငျခငျ.မွနျမွနျလေး ဆိုတော့လူဆိုးတဲ့ ပွောသာ ပွောတာ….ပါးစပျက ဒဈကို ငုံထားပွီးသားအဲဒီ လောကျ ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့မရဲ့ ကောငျးမှနျတဲ့ အပွုအစု အောကျမှ ကနြေျာ့ သုတျရညျတှေ မရဲ့ ပါးစပျထဲကို တဝွကီး ပနျးထုတျလိုကျတယျလုပျခငျြတာ လုပျ ပွီးမှ အားနာသှားတယျ အလုပျခြိနျကွီးထဲမှာ မရဲ့ မကျြနှာလေးကို ကွညျ့တော့ မူမပကျြလို့ တျောသေးတယျလရညျလေးတှကေို လြှာနဲ့ ဝိုကျသိမျးပွီး … ပါးစပျလေးကို တဈရူးလေးနဲ့ ကာပွီး မ ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျသှားပွီး သှားဆေးရသေးတယျ။
ခဏနတေော့ သူပွနျဝငျလာမှ အငျတာဗြူး ဆကျလုပျဖွဈတယျ။ညနေ သုံးနာရီကြျောတော့ ဒီနေ့ အတှကျ သိမျးပွီးလိုအပျတာလေးတှေ ဆကျလုပျ မဆိုးဘူး အဲဒီနကေ့ လူတျော ကောငျမလေးတှေ ၅ ယောကျလောကျနဲ့ အငျဂငျြနီယာ သုံးယောကျလောကျကို ဇကာတငျ ရှေးခဲ့တယျ။ညနကွေတော့ ထုံးစံ အတိုငျး သူ့ ကို ပွနျပို့ပေးပွီးကိုယျက ပွနျလာ။ အလုပျမြားနတေော့သူနဲ့ ကနြျောတောငျ သိပျမလုပျဖွဈကွဘူး။ရုံးမှာလညျး လူမြားလာပွီ ဆိုတော့ နညျးနညျး ဆငျခွငျရ တယျ။ဒါပမေယျ့ မက ကနြေျာ့ အတှကျ အမြားကွီး စီစဉျထားတယျ ဆိုတာ သိရတဲ့ နမေ့ ကို ပိုခဈြမိလာတာပေါ့ဗြာ။ဖွဈပုံက ဒီလို။ထုံးစံ အတိုငျး သောကွာနေ့ ဆိုတော့လူတှကေ အလုပျလုပျရတာ သိပျစိတျမပါကွသလိုနားရကျ အတှကျ အစီအစဉျတှေ ဆှဲနကွေတာပေါတနင်ျလာကလညျး ရုံးပိတျရကျ ဆိုတော့ သုံးရကျ ပိတျတယျလေ။ မက ကနြေျာ့ကို လာပွောတယျ မောငျရေ ဒီအပါတျ ခြောငျးသာ သှားရအောငျလတေဲ့သူ့မိသားစုတှကေို ခြောငျးသာကို လိုကျပို့ပေးခငျြလို့တဲ့။ကနြျောကလညျး သိတဲ့ အတိုငျး မိသားစုနဲ့ ဆို မလှတျလပျမှာ စိုးလို့ မလိုကျတော့ဘူးဆိုတော့မက…..ကိုယျတောခြောစဉျးစားနျောတဲ့ ရုံးက အလနျးလေး နှဈယောကျလညျး ပါမှာတဲ့ မက အကုနျ စီစဉျပွီးသား သူတို့ အတှကျ ဘနျဂလို တဈလုံး ကနြျာ့ နဲ့ ရုံးက ကောငျမလေး နှဈယောကျ အတှကျ ဘနျဂလို တဈလုံး သုံးရကျပိတျလညျး ဖွဈ ခရီးသှားရာသီလညျး ဖွဈတော့ အခနျးတှေ ကပျြတာကို အကွောငျးပွပွီး သူက သခြော စီစဉျပေးထား တာ။
ဒီလို နဲ့ ဒါဆိုလညျး မ သဘောဘဲ မောငျတော့ လိုကျခဲ့မယျ တခနျးရရငျ ထပျယူပေးပါအုံး မနဲ့ တူတူ ကဲရအောငျလဆေိုတော့ဗိုကျခေါကျလိမျဆှဲတယျ အဲဒီနှဈ ယောကျကို စားနတေဲ့ အခြိနျ မ ကို သတိရလိမျ့မယျ မထငျဘူးတဲ့..။ ခြောငျးသာကိုတော့ ကားစီးလုံး ဌားလိုကျတယျဒါမှ သှားခငျြတဲ့ နရော သှားလို့ရမှာလေ မနကျ အစောကွီး ထသှားတာ ဆိုတော့…………. ဟိုရောကျတော့ ဆယျတဈဘဲ ရှိသေးတယျ။ အခနျး check in ဝငျပွီး မက အခနျးကို လိုကျပို့ပေးသေး တယျ။ ပွီးတော့ ဟို နှဈယောကျကိုလညျး….ဒို့မနျနဂြောကွီးကလညျး သောကျတတျတယျနျော နငျတို့ ဝိုငျးသောကျပေးလိုကျအုံး သူ့ကိုပြျောအောငျထား လိုကျ ဒါမှ လစာတိုးမှာ ဆိုပွီး လှမျးနောကျလိုကျပွီး ခဏနမှေ အဈမ ပွနျလာခဲ့မယျတဲ့။ကနျြာလညျး ကဲညီမတို့ လှတျလှတျလပျလပျ အဝတျအစား လဲခငျြလဲ ကွ အဈကိုလညျး စားစရာလေးစီစဉျလိုကျအုံးမယျဆိုပွီးလမျးမဘကျထှကျ……….. ပငျလယျစာ အစုံမှာ ဘီယာ ဝယျပွီး အခနျးထဲ ပွနျလာတော့ ကောငျမလေး နှဈယောကျက အဝတျအစားလဲပွီးပွီးဂါဝနျလေးတှနေဲ့ တဈယောကျက ဘောငျးဘီတောငျ မဝတျထားဘူး။ ကနျြာကွို့ကျတဲ့ ကောငျမလေးက ခတျေဆနျတယျ.ရဲတငျးတယျ။ကဲလာ.စားကွ တဈယောကျက မ ကို သှားချေါဆိုတော့ ….တဈယောကျက အလိုကျ တသိ ထသှားတုနျးကဲညီမက အစားအသောကျပွငျကှာ ဆိုတော့ ထညျ့စရာ ပနျးကနျမရှိဟိုတယျကို လှမျးမှာနဲ့ ညီမ.ရေ နရေောငျခွညျအောကျမှာ ညညျးက ပိုလှနသေလိုဘဲနျောဆိုတော့ မသိသေးဘူးအဈကိုကလညျး.ဒီတိုငျးဆို မလှလို့လားဆိုတော့လှပါတယျ နရေောငျခွညျထိုးထားတော့ ပိုပွီး ကှကျကှကျကှငျးကှငျး မွငျရတော့ ပေါ့ ဆိုမှ လူဆိုးကွီး ဆိုပွီး.လူကို လိုကျရိုကျတယျ။
ဘောငျးဘီ ဝတျလိုကျအုံးမယျဆိုတော့ဝတျမနပေါနဲ့ကှာပွီးရငျလညျး ခြှတျရအုံးမှာ ပူက ပူနဲ့ဒီတိုငျးလေးဘဲ လှပါတယျဆိုတော့သူမကျြနှာလေးက ရှကျသှေး ဖွာပွီး…. ခဈြစရာလေးဗြ သူက သကျမှနျမွငျ့နဲ့ အတျောလေးကို ဆငျတာ ။အဈကိုလညျး လဲလိုကျအုံးမယျဆိုပွီး. ဘောငျးဘီရှညျ ခြှတျခြ အတှငျးခံပါ ခြှတျ ပွီး…..boxer လေး ဝတျလိုကျတယျ။ ဒုတျက ထောငျနတေော့ တနျးလနျးကွီးပေါ့ဗြာအပွငျပွနျထှကျတော့ သူက စိုကျကွညျ့ပွီး ရီနတေယျ။သခြောပါ တယျ.သူနဲ့ ကနြျော ဒီမှာ ဇတျလမျး ဖွဈမယျ ဆိုတာဟိုတဈယောကျရှတေ့ော့ ဟနျဆောငျနမှေ နောကျတဈယောကျက ရိုးရိုးအအ ပုံစံလေးသူ အရကျမူးမှ ကြှဲ ခိုးပျေါမယျလို့ မထငျထားမိခငျကပေါ့။ ခဏနတေော့ ပနျးကနျတှလေညျး ရောကျလာ…မတို့လညျး ရောကျလာလို့ သူ့ညီမကို ဟငျးပှဲတှေ ခှဲပေးပွီး သူတို့ မိသားစုနဲ့ တူတူ ပွနျစားခိုငျးလိုကျတယျမရဲ့ ညီမကလညျး ဂါဝနျ အပါးလေးနဲ့နရေောငျအောငျမှာ ကော့နတေဲ့ တငျလေးကို ငေးလိုကျသေးတယျ။ကဲ မစားခငျ အမောပွလေေး ဆိုပွီး လေးယောကျသား ခှကျကိုငျ ဒီလိုနဲ့ သောကျလိုကျ စားလိုကျဟိုကောငျမလေးက တကယျ့အူရိုငျးကနြော့ ကောငျမလေးက အူ ယှဉျ သုံးခှကျလောကျ ဝငျပွီးတော့ ဟိုကောငျမလေးက စကား အတျောမြားနပွေီ လြှာကလညျး လေးလာတဲ့ အသံနဲ့ကနြေျာ့ကိုလညျး ကိုကို ဆိုပွီး ချေါနပွေီ ခှငျကတော့ ဝငျပွီ ကနြျောတို့ သုံးယောကျကတော့ ဆကျသောကျနတေုနျး မက ဟဲကောငျမလေး နငျ မသောကျနဲ့တော့ မူးပွီး အနျနအေုံးမယျ ဒို့ဂြာကွီး စိတျဆိုးသှားမယျဆိုတော့ရပါတယျ မရယျ ဂြာကွီးက သဘောကောငျးပါတယျ ဆို ပွောလညျး ပွော ခှကျလညျး မော့လိုကျသေးတယျ။ ထိုငျနတောကလညျး အောကျစက လှတျတော့အတှငျးက ပငျတီ အဖွူးလေးက ပျေါနပွေီ…..သူ့အဖုတျက သိပျမဖောငျးဘူး။
သိပျမကွာပါဘူး……ဆရာမ ငါးခှကျ အယောကျ မှောကျသှားတယျအိပျခငျြတယျဆိုပွီး ဝငျသှားတာ ပွနျထှကျမလာတော့ဘူး သောကျရငျး ပုလငျး ကုနျသှား လို့မက ထှကျဝယျရငျကွာနမေယျ..အခနျးထဲက ပုလငျး အရငျယူလာမယျဆိုပွီးသှားယူပေးနတေုနျး ခဈြလေးနဲ့ ကနြျောဘဲ ကနျြခဲ့တာ သူ့နံမညျက ယု တဲ့.အပွညျ့အစုံတော့ မပွောခငျြဘူး ယုလေး ဘယျလိုလညျး ရသေးလားဆိုတော့ အိုကပေါတယျတဲ့ ခဈြစရာ အမူအရာလေးနဲ့ခဏနတေော့ မ ပွနျလာတော့ ယုက အထဲဝငျသှားတုနျးမယုက အဆငျပွရေဲ့လား ဆိုတော့မ သူ့ကို မေးကွညျ့ပွီးပွီသူကလညျး လိငျ ကိစ်စ စမျးခငျြနတောတဲ့ မကို အဲဒီကိစ်စ အမွဲတမျး ပွော တိုငျး မက ညှနျးထားလို့ သူက သိပျစမျးခငျြနတောတဲ့။ မောငျလေးဆို ဒုတျက အကွီးကွီး ဖွဈနိုငျတယျ ဘာညာနဲ့ ဟာသတှေ ပွောပွီး စနကွေ ဆိုတော့ သူက သိပျသိခငျြနတော ဒါဆို သုံးယောကျ တူတူ လုပျမလား ဆိုတော့ အဲဒီလောကျကွီးတော့ မဖွဈသေးဘူးနဲ့ တူတယျတဲ့ကိုယျ့ဟာကိုယျ အရငျ လုပျပွီးမှ မကလညျးကှာ မောငျက အရမျးဖီးလာနပွေီ ဒီမှာ ကွညျ့ ဆိုတော့ ကိုယျတျော ဝရနျတာကွီးမှာနျောတဲ့.လူတှလေညျး မွငျသှားအုံးမယျ ဆွိုပွီးဒုတျလေးကို ခ ပျဖှဖှလေးကိုငျပွီး ဂှငျးတိုကျပေးတယျ။ ပွောဖို့ မနေ့လေို့ မ ဝတျထားတာက ကွိုးတခြောငျးနဲ့….အောကျက စကဒျ အတိုလေး အောကျခံ ဘောငျးဘီလညျး မပါဘူး ။ ဒါနဲ့ သူ့ကိုလညျး ပွနျနိုကျပေးလိုကျတယျ။ဆယျမိနဈလောကျ နမှေ ယုက ထှကျလာတယျ.သခြောတယျသူလညျး ဘရာခြှတျခဲ့ပွီ ယုရေ ကွညျ့ လညျး လုပျနျောတဲ့ဒို့ဂြာကွီး.ဘောငျးဘီလညျး ပေါကျထှကျတော့မယျဆိုတော့ယုက ဟုတျပအဈကိုဟာကွီးကလညျး ထောငျနလေိုကျတာ…မနာဘူးလားတဲ့ နာတော့ နာတာပေါ့ဟ ခြှတျထားလို့မှ မရတာ။ ပုဆိုးလညျး မဝတျခငျြဘူး မက ကဲဟာ ငါတော့အိပျခငျြလာပွီ မနကျကလညျး အစောကွီး ထလာရတာ ညနရေထေဲ ဆငျးအုံးမှာ ဆိုတော့ အားမှေးလိုကျအုံးမယျ ဆိုပွီး ပွနျသှားတယျ။
ကဲယုရေ.. ကိုယျတို့လညျး သိမျးရအငျေ ဆိုပွီး အထဲဝငျတော့ ဟိုဆရာမက အထဲမှာ အိပျတာ ပိုးလိုးပကျလကျ တကျပွီးတောငျ စျောလိုကျခငျြသေးတယျ။ ဆရာ ဘယျလိုလညျးတဲ့ ဖီးလျတှေ စှတျတကျနပွေီလားဆိုပွီး ယုက စတာနဲ့ ငါက နငျမွငျကတညျးက ဖွဈနတောဒီမှာ ကွညျ့ပွီး ဆိုပွီး ဘောငျးဘီ ခြှတျပွ လိုကျတယျ။သူက ဟာ အကွီးကွီးဘဲ ဗှီဒီယိုတှထေဲက အတိုငျး ဆိုပွီး မကျြလုံးလေးပွူး ပွီး.လြှာလေး တဈလဈလေးနဲ့ ယု ကိုယျ့ကို ကူညီအုံးကှာ ဒါကွီးထ နရေငျ အိပျပြျောမှ မဟုတျဘူးဆိုတော့ ဘယျလို ကူညီရမယျ ဆိုတာ ရှငျးပွလိုကျတယျနှဈယောကျသား ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျပွီး သူက ကိုယျ့ကို ဂှငျးထုပေးနေ တုနျး ယုကိုလညျး ပွနျလုပျပေးမယျဆိုပွီးသူ့အဖုတျလေးကို ခပျဖှဖှလေး ပှတျပေးပွီး ဖငျလေးကိ ညှဈလိုကျနဲ့………. သူစိတျပါလာအောငျ လုပျပေးလိုကျ တယျ။ ပွီးတော့ယုပိုကောငျးအောငျ လုပျပေးမယျကှာ ကုနျးခိုငျးလိုကျပွီး ဂြာပေးလိုကျတယျ သူ့ဖငျလေးလေးက ဖှေးပွီး အမှေးနုလေးတှနေဲ့ ဘေး နှုတျခမျးသားလေးတှကေ နညျးနညျး တှဲနပွေီ ကနြေျာ့ အကွိုကျ အနအေထားရတော့ ကိုယျမရတော့ဘူး ယုရယျလိုးခငျြနပွေီ ဆိုပွီ ဒုတျကို တပွေီ့း ဖွေးဖွေးခငျြး ထညျ့ပေးလိုကျတယျ။ ဒီလိုနဲ့ သူက ပွနျဆောငျ့လိုကျ ။ နောကျကနေ …. နို့လေးတှကေို ဖကျပွီး ဆှဲတာ doggy style နဲ့ နှဈယောကျသား ကောငျးနပွေီဆိုတော့ သူပွီးအောငျ အစိလေးကို လှမျးကလိပေးလိုကျတာ….သိပျမွကွာဘူး ခဏလေးနဲ့ ပွီးသှားတယျကိုယျလညျး မွနျမွနျပွီးအောငျ လုပျ ပွီး နှဈယောကျ ရတေူတူ ခြိုးလိုကျတယျ ရခြေိုးနတေုနျး အသဲယားလာလို့ ထပျဂြာပေးပွီး သူ့ကို ခြီပွီး အပွငျထှကျလာတယျအပွငျရောကျတာနဲ့ သဘကျ လေး နဲ့ သုတျပေးပွီး ခုတငျပျေါ မှာ ပကျလကျလေး သူ့ကို ပေါငျတှေ ပုခုံးပျေါ စှဲတငျပွီး…………ထပျဆှဲလိုကျသေးတယျ သူလညျး အောကျပေးတော့ ကောငျးတယျဗြာ……လီးဝငျကောငျးအောငျ ပွငျပေးပွီး အောကျက ပငျ့ပငျ့ပေးတယျဟိုစျောလေးကတော့ ဟောကျတောငျ ဟောကျနပွေီ။
ကနြျောလညျး အပွငျမှာ တခြီ ထပျပွီးအောငျ လုပျပေးလိုကျပွီးမှ ကဲ ကလေးရေ…အိပျကရြအောငျ ဆိုပွီး ခုတငျခငျြး ခြိနျးလိုကျရတယျ ပငျပနျးတာလညျး ပါ နှဈခြီတောငျ ဆှဲထားတာဆိုတော့အိပျပြျောသှားတယျ။အိပျယာက နိုးလာတော့ နာရီကောကျကွညျ့လိုကျတာ လေးနာရီကြျောနပွေီ ဘေးကို ကွညျ့လိုကျ တော့တဈယောကျမှ မရှိတာနဲ့အဝတျအစားလဲ ရကေူးဘောငျးဘီလေး ဝတျပွီးကမျးခွဘေကျ ထှကျလာခဲ့ပွီး မကို လိုကျရှာတယျ။ မ နဲ့ သူ့မိသားစုက ဓါတျ ပုံရိုကျနတေော့ ကနြျောလညျး အနားရောကျသှားရော အတျောဘဲ အဈကို လာတာနဲ့….ဒီမှာ ဓါတျပုံရိုကျပေးပါအုံးတဲ့ဆိုပွီး မရဲ့ ညီမလေးက ဖုနျးလေး ထိုး ပေးလို့ သူတို့ကို ဓါတျပုံရိုကျပေးရငျး. .ငေးလိုကျတယျ မရဲ့ ညီမလေးက အတျောလေးကို တောငျ့တာပါ တငျကားကားလေးကိုလုံးဝနျးတဲ့ ဖငျလေးနဲ့ ကှပျ ထားတော့ တကယျ့ကို အနှဈဘဲ အနတေျော ရငျနှမှာကလညျး ဘရာဇီယာကွားက ထိုးဖောကျတော့မယျ့ အတိုငျး နကေ ကနြပွေီ ဆိုတော့ပငျလယျဘကျ ကြောပေးထားတဲ့ အတှကျ.သူ့အတှငျးခံလေးကို ရေးတေးတေး လှမျးမွငျရတော့ ဒီကကောငျက ဒုက်ခပေးပွီလေ ရကေူးဘောငျးဘီအောကျမှ အတှငျးခံမှ မ ပါတာ ကိုယျဟာကွီးက ထိုးထိုးထောငျထောငျ ဖွဈလာတပေါ့။ဟိုနှဈယောကျကော မ ဆိုတော့ မက ရစေပျကို လကျညိုးထိုးပွတယျ ကနြျောလညျး ရကေူး ခငျြလို့ သှားလိုကျအုံးမယျနျော မ ကော မဆငျးဘူးလား ဆိုတော့ ရကွေောကျတယျတဲ့။ကနြျောလညျး ဟိုနှဈယောကျ ရှိတဲ့ နရောကို သှားပွီး ဟေ့ ရထေဲဆငျး ရအောငျလဆေိုတော့ရမေကူးတတျဘူးတဲ့ကနြေျာ့ ခဈြလေးက တော့ သှားခငျြပုံဘဲအကွံထုတျရတယျ။
ကဲဒါဆို ငါလညျး နှဈယောကျတော့ တပွိုငျတညျး မထိနျးနိုငျဘူး…တယောကျခငျြးဆီ ဆငျးကွဟာ…ဘောကိုငျပွီး လိုကျခဲ့ဆိုတော သူဇာက သူအရငျ ဆငျး မယျတဲ့ကနြျောတို့ ရုံးမှာက တကယျ့ အခြောအလှတှခေညျြး ခနျ့ထားတာ သူဇာက လညျး တောငျ့တောငျ့ဖွောငျ့ဖွောငျ့ သူ့ဝတျထားတဲ့ စကဒျလေးကလညျး တိုတိုလေး အပျေါက တီရှပျ အဖွူရောငျအောကျက ဘရာ ပနျးရောငျလေးအောကျမှာ ပုနျးနတေဲ့စနနှေဈခိုငျကို စိတျထဲက မှနျးကိုငျကွညျ့တယျ.။ သူဇာကို ဘော ပျေါ တငျပွီး ရေ နညျးနညျး နကျတဲ့ နရောထိ တှနျးသှားပေးလိုကျတယျ။ ရနေကျမှ လူလညျး ရှငျးတာလေ လူအမြားစုက ကမျးခွနေားမှာဘဲ ဆော့ကွ တာကိုး ရနေကျရောကျတော့ပကျလကျလေး ဖွဈနတေဲ့ သူဇာကို စလိုကျတယျ ငါထားခဲ့မယျနျော.နောကျတဈယောကျ သှားချေါလိုကျအုံးမယျ ဆိုတော့ အကွောကျတလနျ့နဲ့ မလုပျပါနဲ့ အဈကိုရယျတဲ့.ညီမ တကယျ ကွောကျလို့ပါတဲ့အလကားစတာပါ ဟာ ဆိုပွီး ပါးလေး ဆှဲညှဈလိုကျတယျ။ ကမျးခွကေ ကြ နျောတို့ကို သခြော မမွငျရလောကျတော့ဘူး ဒါနဲ့ သူဇာကို သခြော ထိနျးထားနျော.လှိုငျးစီးရအောငျ ဆိုသူ့ဘောကှငျးကို အသာလေး ခိုထားလိုကျတယျ အနီးကပျ ကွညျ့မှ….. သူ့ နို့လေးတှကေ ပိုပွီး စို့ခငျြစရာ ကောငျးလာသလိုဘဲ ဒါနဲ့ လှိုငျးခပျကွမျးကွမျးလေး လာတော့ .ခြောလှဲရောထိုငျးပွီး. သူ့ပေါငျကွား ထဲ ခေါငျးဝငျလိုကျတယျ။ အဈကိုကလညျး ငရဲကွီးပါအုံးမယျ ကနျတော့နျောတဲ့ ရပါတယျကှာ ဆိုပွီး.ညညျး အသားလေးတှကေ အိနတောဘဲ ပေါငျလေး ပျေါ ခေါငျးအုနျးပွီး အိပျလိုကျရရငျတော့ ဇိမျဘဲ ဆိုတော့ သူ စဉျးစားနပေုံရတယျ လကျတဖကျကလညျး ပွောရငျးနဲ့ ပေါငျလေးတှကေို မသိမသာလေး ပှတျ ပေးလိုကျတယျ။သူ့ပေါငျလေး ဖွေးဖွေးခငျြး ကားလာတော့လှိုငျး အလှုပျမှာ အဖုတျလေးပျေါ လကျတငျလိုကျတယျသူလညျး ကွညျ့ရတာ အရသာ တှနေ့ပေုံ ပျေါတာနဲ့ စကဒျအောကျထဲ လကျထညျ့ပွီး ပငျတီလေးပျေါက နေ ဖွေးဖွေး ခငျြး ပှတျပေးလိုကျတယျ။
သူဇာက ခုမှ သခြောကွညျ့မိတယျ တကယျ့မငျးသမီးလေးလိုဘဲနျော အသားကလညျး ညိုတာညိုတာ ခြောမှတျနတောဘဲ ဆိုတော့ အဈကိုက ဘယျကွညျ့ မှာလညျး သဉ်ဖာနဲ့ အဈမကိုဘဲ ငမျးနတောကိုးတဲ့ ……စိတျဆိုးတဲ့ လသေံလေးနဲ့ ဟုတျပါဘူးကှာ အဈကို အလုပျမြားတာလညျး သိရဲ့သားနဲ့ ကဲပါ …ကိုယျ လညျး စိတျပါလာပွီ သူဇာရယျ ကိုငျကွညျ့မယျနျော ဆိုပွီး ခါးကို နညျးနညျး မ ခိုငျးပွီး ဘောအောကျကနေ အဖုတျလေးကို အားရပါးက ပှတျပေးလိုကျ ဆား ငနျရနေဲ့ ဆိုတော့ အဖုတျလေးက အခြှဲဓါတျက ခဏလေး ပြောကျပြောကျသှားတယျ။ ညကမြှ ကိုယျ အ၀ ပွုစုပေးတော့မယျကှာ အခု သန်တာကို သှားချေါ လိုကျအုံးမယျ ဆိုပွီး ။ကမျးခွဘေကျ ဆှဲ သန်တာနဲ့ကတော့ တကွိမျ စားပွီးသား ဆိုတော့ကဈဆငျလေး ဘာလေး ဆှဲပွီး နညျးနညျ ဆော့ပေးလိုကျတယျ… ကဲ ဟာ ငါ.ပငျပနျးပွီ သှားနားလိုကျအုံးမယျ.ရကေူးကနျကိုလိုကျလာခဲ့ဆိုပွီး ထှကျလာခဲ့တယျ။အပွငျရပေနျးမှာ ရခြေိုးပွီး……ရကေူးကနျထဲ ဆငျးဘီယာ နဲ့ အားလုံးကွျော မှာပွီး စိမျနလေိုကျတယျ။ ခဏနတေော့ မ ရယျ သူ့ညီမရယျကောငျမလေး နှဈယောကျ.လေးယောကျသား လိုကျလာကွတယျ။ ကနြျောက ဘီယာသောကျတော့သူတို့ကလညျး သောကျခငျြတယျ ဆိုလို့ ကနျဘေးမှာ ပုလငျးထောငျပေးလိုကျတယျ။သူတို့ကတော့ ရထေဲ ဆငျးခငျြပမေယျ့ ရကေူး ဝတျစုံ မပါလို့ ဆငျးလို့ မရဘူးသူတို့က အကြီအဖွူဘဲ ခှငျ့ပွုတာလေ။မရေ ညဘကျ ဘာအစီအစဉျရှိလညျး ဆိုတော့ကမျးခွမှော ထှကျသောကျကွမယျတဲ့ စားစရာတော့ အပွငျကဘဲ မှာပွီး စားကွတာပေါ့ ဆိုတော့ မခြောလေးယောကျ ကိုယျတဈယောကျဒီည ကမျးခွဘေကျကို ထှကျလာခဲ့တယျ။
ဂီတာလညျး မပါတော့ ဖုနျးနဲ့သီခငျြးလေး ဖှငျ့ပွီး နားထောငျရငျး အာလူးဖုတျပေါ့ညဘကျ ကိုးနာရီလောကျကွတော့ခဏလေး toilet သှားခငျြလို့ ဆို…အခနျး ပွနျမယျ့ ပုံစံနဲ့ မကို မကျြနှာရိပျ မကျြနှာကဲ ပွလိုကျတယျ မ က ဟယျငါလညျး အမတေို့ အခွအေနသှေားကွညျ့အုံးမှ သူတို့ အိပျခငျြ အိပျဆိုပွီး သှားပွော လိုကျအုံးမယျဆိုပွီး လိုကျလာခဲ့တယျ။ မ အမတေို့ကို ပွောပွီး မွနျမွနျလာခဲ့နျော အခနျးထဲက စောငျ့နမေယျဆိုသူ့ကို ပွောပွီး အခနျးထဲမှာ အဆငျသငျ့စောငျ့ နလေိုကျတယျ။ ဘယျသူတှကေိုဘဲ လုပျရ လုပျရ မကို တော့ လုပျခငျြနတေုနျးဘဲ မလညျး အခနျးတခါးဖှငျ့ရော ခကျြခွငျး..သူ့ကို ဖကျ ခုတငျပျေါ ပကျလကျ လှနျပွီး ဂြာပေးလိုကျတယျ။ ပွီးတော့ တခြီကောငျး အားရပါးရ လိုးပေးလိုကျတယျ။ မ”နဲ့က ခိုးလုပျဖို့ မလှယျဘူး သူက အရမျးကောငျးလေး ပိုအျောလဘေဲ ဒါကွောငျ့ ခိုးစားရတာ လူအတျောရှငျးမှ အဆငျပွတော။လုပျနကွေဆိုတော့ တဈယောကျ အကွိုကျ တဈယောကျသိပွီးသားလေ ဆယျ့ငါးမိနဈလောကျ ကွာတော့ တူတူ ပွီးလိုကျပွီးကမျးခွဘေကျ ပွနျလာခဲ့တယျ။ဒီညက သူ့ဇာကို လုပျခငျြတာ ဆိုတော့ သန်တာကို မူးအောငျ တိုကျရမယျဆိုမှ သန်တာကလညျး တ ကယျ့ ကွှကျတှငျးဘီယာ တကဒျသာ ကုနျသှားတယျ သူက အေးဆေး မကလညျး သောကျနိုငျတယျ။ မရဲ့ ညီမနဲ့ သူဇာသာ သိပျမသောကျကွတာ ကနြျောတို့ သုံးယောကျက အရမျး သောကျနိုငျတယျ ကဲ ညီမလေးနဲ့ သူဇာ ဟိုတယျက တဈယောကျယောကျကို ဘီယာ သှားဝယျခိုငျးလိုကျဟာ အခနျးထဲမှာ အဈကို ပိုကျဆံအိတျရှိတယျဆို သော့ပေးပွီး ခိုငျးလိုကျတယျ သူ့တို့ နှဈယောကျ ထှကျသှားမှ ဘယျလိုလညျး ဆရာလေး နလေ့ညျက အရမျးကောငျးလား မကို သန်တာ ပွောပွလို့ အားလုံးသီပွီးသားတဲ့ဟာကနြျောတောငျ ရှကျသှားတယျ။
သန်တာကတော့ ပွုံးစိစိနဲ့ ကမြတို့ ဆရာက အလုပျလုပျတာတငျ တျောတာ မဟုတျဘူး ဒီကိစ်စလညျး ဆရာကွီးဘဲ သန်တာကတော့သဘောကတြယျဆိုဘဲ။ဒီလို လုပျပါလား2in 1 စမျးကွညျ့ရအောငျ ဆိုတော့ အားလုံးက ကောငျးနပွေီသားဆိုတော့ အိုကပေေါ့ ခကျတာက တဈယောကျယောကျ အိပျမှ ဖွဈမှာလဒေါမှ မဟုတျ ကမျးခွမှော ထှကျလုပျကွမလား ဆိုတော့လညျး မဖွဈဘူး မရဲ့ အျောသံ အကွောငျး ကနြျော ကောငျးကောငျးသိတယျ။ ဒါဆို မနကျဖွနျ စီစဉျလိုကျ မယျ သူဇာရယျ ညီမတို့ မိသားစုရယျကို ကားနဲ့ ငှဆေောငျဘကျ ချေါသှားခိုငျးပွီး ငါတို့ သုံးယောကျနခေဲ့လိုကျမယျဆိုပွီး .မ”က အကွံပေးတော့ အိုကပေေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ဆကျသောကျကွတာ တိုကျပှဲ အရငျဆုံး ကသြှားတာက မ သူတိုကျပှဲကသြှားတော့သုံးဗူးဘဲ ကနျြတော့တယျ။ကဲ သန်တာရေ ကိုယျတို့ ဒါလေး ဖွတျ လိုကျရအောငျ ဆိုပွီးသူ့ကို အတငျး ထိုးတိုကျလိုကျတယျ။ ဘယျခံနိုငျမှာလညျးဗြာ ကိုယျတောငျ အတျောလေးကောငျးနပွေီ မမူးတာဆိုလို့ မရဲ့ ညီမလေးးဘဲ ရှိတော့တယျ။ကဲ ပွနျကွရအောငျ ဆိုပွီး မ”ကိုတဖကျစီ တှဲပွီး……..အခနျးပွနျပို့ အထဲရောကျတော့.အဝတျလဲမယျဆိုပွီး သန်တာက အကုနျခြှတျခလြို့သူဇာက ကှယျပေးထားတယျကိုယျလညျး မသိခငျြယောငျ ဆောငျ အပွငျခဏထှကျနပေေးလိုကျတယျ ပွနျဝငျလာတော့ သန်တာက ညအိပျဝတျစုံလေး သူဇာက ရခြေိုးခနျးထဲ အဝတျအစားဝငျလဲနပေုံရတယျ။
good night သန်တာ အိပျတော့ နျောဆိုပွီး …….သူ့နဖူးလေး နမျးပေးလိုကျတယျပွီးတော့ တိုးတိုးလေး အားမှေးထားဆိုပွီး ပါးလေး ညှဈပွောပွီး ကိုယျလညျ အဝတျအစား လဲလိုကျတယျ။ခဏနတေော့သူဇာက ဟိုတယျက ညအိပျဝတျစုံလေးဝတျပွီး ပွနျထှကျလာတယျ သူဇာတော့ မအိပျခငျြသေးဘူးအပွငျခဏ ထှကျထိုငျအုံးမယျဆိုတောက…….ကိုယျကလညျး အိုကပေေါ့အပွငျမှာ နှဈယောကျသား လကေနျရငျးက အေးလာလို့ ဆိုပွီး သူ့ကို ဖကျထားရတယျ..။ သူ ဇာ့ကို ဖကျထားရငျးက ကနြျောလကျတှကေ အလိုကျတသိ……. လုပျရှားပေးလိုကျတယျ။ အကြီပျေါကနေ နို့လေးကို ဆုပျနယျပေးလိုကျပွီး….နှုတျခမျးလေး ကို နမျး……. ဖီးလျဝငျလာတော့မှာ အောကျဘကျကို ဆငျးပွီး အဖုတျလေးကို ကိုငျကွညျ့တော့သူ့က အဆငျသငျ့ဖွဈနပွေီဆိုာတာ သိလိုကျရတယျ။အထဲ လညျး မဝငျခငျြတာနဲ့အပွငျမှာဘဲ ဆှဲဖို့ စဉျးစားထားတာ တခါမှလညျး လူမွငျကှငျးမှာ မလုပျဘူးတော့ စမျးကွညျ့ခငျြနတော။ ဒါနဲ့ သူ့ကို ဆှဲညှိလိုကျတယျ အထဲမှာလူရှိတော့ အပွငျမှာဘဲ ဆှဲရအောငျကှာဆိုတော့အဈကိုကလညျး ရှကျစရာကွီးတဲ့သူ့ငွငျးသံက အားပြော့နတေော့ ထိုငျခုံပျေါကနေ အောကျကို ဆငျးပွီး သူ့ကို အပျေါတကျထိုငျခိုငျးလိုကျတယျ သူ့အဖုတျလေးက ခြောဆီတှကွေောငျ့ဒဈကွီးက အဖုတျလေးထဲကို အသာလေး ဝငျသှားတာ နညျးနညျးခငျြး နဲ့လိုကျ သူက ဇကောဝိုငျးလိုကျနဲ့ကနြျောလညျး အောကျက အသာလေး အလိုကျသငျ့နပေေးလိုကျတယျ။သူလညျး မလုပျရတာ ကွာလို့ ဖွဈ မယျခဏလေး ပွီးသှားတယျ။
ဆံပငျကို လကျမောငျးကို ကုတျပွီး အားယူလိုကျကတညျးက သဘောကျပေါကျလိုကျပွီ။ဒါနဲ့ ခဏလေး မှိနျးထားပွီး သူ့ကို နမျးလိုကျဟိုပှတျသညျပှတျလိုကျ နဲ့ ဖီးလျပွနျသှငျးပေးတယျ ပွီးတော့ သူ့ကို ပကျလကျလှနျခိုငျးပွီး လှကွေီးထိုး ရိုးရိုးလေး လိုးရငျးက အားမရတော့ဘူးဗြာပတျဝနျးကငျြလညျး ဂရုမစိုကျ တော့ဝရံတာကို လကျကိုငျခိုငျးပွီးကုနျးခိုငျးလိုကျတယျ။ သူ့ဂါဝနျလေးကို မပွီး.နောကျကနေ ကဈတာ ကငျောားလိုကျတာဗြာ စီးနတောဘဲ သူ့ဖငျကွီးက အားမလို အားမရနဲ့ ပွနျပွနျဆောငျ့တာမြားအသံတောငျ ထှကျတယျ။ပွီးသှားတော့ နှဈယောကျသား အထဲဝငျ ရခြေိုးခနျးထဲ ဝငျပွီး သူ့အဖုတျလေးကို ရဆေေးပေးလိုကျတော့သူက အဈကိုက အရမျး နူးညံ့တာဘဲနျောတဲ့အဲဒီလို ပွောမှတော့ကိုယျကလညျး..ဘယျနနေိုငျမှာလညျး……….ပို အစှမျးပွရတာပေါ့ ဂြာပေးလိုကျတာ လူးနတောဘဲအဈကိုကိုလညျး ပွနျလုပျပေးမယျဆိုလို့ သူ့ပွုစုတာ ခံလိုကျတယျ။ သူ့လြှာစှမျးလညျး မသေးဘူးးဗြာဒဈလေးကို လြှာလေး နဲ့ လြှကျတာမြား ကောငျးလိုကျတာဗြာ။ပွီးတော့ ဒုတျကို အားမလို အားမရ ကိုငျပွီး ထုလိုကျ ပါးစပျလေးနဲ့ ငုံလိုကျ အရမျးကောငျးနတေော့ ပွီးသှားမှာ စိုး တာနဲ့သူ့ကို ခြီလိုကျပွီး ဘစေငျပျေါကို တငျပွူးထှကျနတေဲ့အဖုတျလေးက လိုးခငျြစရာလေးဗြာ ထူးခွားတာ တခုက……သူ့အမှေးလေးတှကေ အတျော နူးညံ့သေးတယျ။ ဒါနဲ့ကိုယျလညျး သိပျမစဉျးစားတော့ဘူး ဒဈကို အဖုတျထဲ ထညျ့သှငျးလိုကျတယျလညျပငျးလေးကို နမျးပွီး……. နားရှကျလေးတှေ စုပျ ပေးလိုကျ……ဆိုတော့ သူလညျး အရမျးကောငျးနပေုံရတယျဆောငျ့ဆောငျ့ …..မွနျမွနျဆောငျ့ ဆိုတာနဲ့.စောငျ့လိုကျတာအဖုတျနဲ့ ဘောရိုကျသံ တပကျြပကျြ က အကယျြကွီးဘဲ…..တျောသေးတယျအပွငျကလူ မနိုးလို့။
သူပွီးလို့ သိပျမကွာဘူး ကနြျောလညျး လိုကျပွီးပေးလိုကျတယျ နောကျ နှဈယောကျသား သနျ့ရှငျးရေး လုပျရငျး အိပျယာပျေါ ကိုယျစီတကျလိုကျကွတယျ။ ထပျလုပျခငျြသေးပမေယျ့ သုံးယောကျ တဈယောကျဆိုတော့ တကယျလညျး သုတျရညျက ကြဲနပေါပွီ။မနကျခငျး အိပျယာက နိူးတော့ ဘယျသူမှ မရှိတော့ ဘူး..နာရီကွညျ့တော့ ၉ နာရီခှဲနပွေီ။ ဒါနဲ့ မတို့ အခနျးဘကျကို သှားကွညျ့လိုကျတယျ…..အသံတော့ မကွားရ. တခါးလေးကို တှနျးဖှငျ့လိုကျတာအားပါးပါး တမငျကွံစညျရငျတောငျ ဒီလို မွငျကှငျးမြိုး တှရေ့မှာ မဟုတျဘူးဗြာ။မရဲ့ ညီမလေးအဝတျအစားလဲနတော ဘယျသူမှ မရှိတော့ကိုယျလုံးတီးလေးနဲ့အတှငျးခံ လဲနပေုံလေးက အခုထိ မကျြစိထဲက မထှကျသေးဘူးဖငျနှဈလုံးကွားက နောကျကို ပွူးထှကျနတေဲ့ အဖုတျလေး အတှငျးသားလေးတှကေရဲနတောဘဲဗြာ သူ့တငျပါးမှဲ့လေးလညျး ရှိသေးတယျ။ ဆန်ဒကို သိက်ခာနဲ့လညျး မထိနျးနိုငျတော့ဘူးဗြာ သူ့ကို နောကျက ဖကျပွီး လညျပငျးလေးကို နမျးလိုကျတယျ ခဈြမိသှား ပွီကလေးရယျ ကိုကို တကယျ မထိနျးနိုငျတော့ဘူး ခဈြခှငျ့ပေးပါနောကျဆိုပွီးစကားလညျးပွော နို့အုံလေးလညျး ပှတျပေး ပွီးတော့ ခုဏကလို ပွနျကုနျးခိုငျး ပွီး.စောကျဖုတျလေးကို အားရပါးရ ယကျပေးလိုကျတယျသခြောတယျဗြာသူ့မှာ အတှအေ့ကွုံသိပျမရှိသေးဘူးစောကျဖုတျယကျတာတောငျ ကောငျမလေး က မခံနိုငျဘူး ဒူးလေးတှေ ကှေးကလြာတယျ။
အခြိနျလညျး သိပျမရတော့ကုတငျကို လကျထောကျခိုငျးပွီး………… နောကျက ဖွေးဖွေးခငျြး သှငျးပေးမလို့ဘဲ။စျောကဘဲ ကွပျတာလား..ဇောကဘဲ ထနျ နလေို့လား မသိဘူး.တျောတျောနဲ့ မဝငျဘူးဗြာပကျလကျ ပွနျလနျခိုငျးပွီး……..လကျညိုးနဲ့ အရငျ လိုးပေးလိုကျတယျ.ပွီးမှာ လကျခလယျ အကူညီပါ ယူပွီး ဖွေးဖွေးခငျြး မှပေ့ေးလိုကျတယျထှကျကလြာတဲ့ အရညျတှေ…နညျးတာ မဟုတျဘူးဗြာ။ ခဏနမှေ ခေါငျးလေးတပွေီ့း ဖွေးဖွေးခငျြး သှငျးပေးလိုကျ တယျ သူ့ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ အမိနျ့တျော အတိုငျးဘဲ ကိုယျလညျး မကွမျးရကျဘူး ဖွေးဖွေးခငျြး မှေးလိုးပေးလိုကျတယျ သူက ကောငျးလှနျးရငျ အံကွိတျပွီး ညညျး တယျဗြာ တကယျပါ အခုထိ ဒီမွငျကှငျးလေး မှတျမိနသေေးတယျ။ လိုးလို့တျောတျောကို ကောငျးတာပါ အခြိနျလညျး သိပျမရတော့လို့ လုပျရှားပေးလိုကျ တယျ သူလညျး နောကျတခြီပွီးတော့မယျ့ ပုံစံဘဲ လကျမောငျးတှကေိုနညျးနညျးမွနျမွနျလေး အသားကုနျဆှဲကုတျနတေယျကိုယျလညျး သူ့နဲ့ အပွိုငျ ခပျပွငျး ပွငျးနဲ့ ခပျသှကျသှကျလေးလုပျရှားပွီးပှဲသိမျးလိုကျတယျ
ကျနော် နိုင်ငံခြားက ပြန်လာတော့။ အလုပ်တွေ လိုက်လျှောက်တယ်ဗျာ…….မကိုလည်း လွမ်းနာကျ..။နိုင်ငံခြားမှာလည်း ဆယ်နှစ်ကျော်လာတော့ ပျင်းလာ လို့ ဆိုပြီးတိုင်းပြည် ပြန်လာခဲ့တာ။ နိုင်ငံခြားက လစာရဲ့ သုံးပုံ ပုံ တပုံလောက် ရရင် လုပ်မယ်ဆိုပြီး ဆုံးဖြတ်ထားတာ ခက်တယ်ဗျာ လစာတွေက အတော် နည်းတယ် မြန်မာပြည်က လူတွေကို တကယ်လည်း အံ့သြမိတယ် ဒီလောက် ဈေးကြီးတဲ့ ကုန်ဈေနှုန်းကို လစာနည်းနည်းလေးနဲ့ တောင့်ခံထားတာ အတော် လေး ချီးကြူးမိပေမယ့် စိတ်ထဲကတော့ တကယ် ဂရုဏာ သက်မိတယ်။ ကံကောင်းတယ်ဘဲ ပြောရမလား မသိဘူး FDI ကုမ္ပဏီ တခုက မြန်မာပြည်မှာ invest လုပ်ပြီး ကုမ္ပဏီ အသစ်တဲ့။ သွားပြီး အင်တာဗျူးလုပ်တာ အောင်သွားတယ် အဓိကကတော့ အင်္ဂလိပ်လို နည်းနည်း ပါးပါး ပြောတတ်ပြီး လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အများကြီး ရှိလို့ပါ။ အမှန်အတိုင်း ပြောရရင် ခန့်မှန်းထားတဲ့ လစာထက် ပိုများတယ်..။ အခြား Facility လည်းရသေးတယ်။ ကျနော်က လည်း နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီတွေ အကြောင်း နားလည်တော့…။ နယ်ကလူဆို အိမ် စီစဉ်ပေးမယ် ထင်ပြီး တောင်းလိုက်တာ ရသွားတယ်။
ကားလည်း ပေးတယ်………ခက်တာက ကျနော် ကားမမောင်းရဲဘူးဗျ ရာထူးကတော့ Country Manager…ဆိုတော့ မြန်မာပြည် အတွက် အကြီးဆုံးပေါ့ဗျာအဲဒီ အချိန် ကျနော့် အသက်က ၃၀ ဘဲ ရှိသေးတယ်။ဒီလိုနဲ့ ….ကျနော့် အလုပ် အတွက် Plan တွေ ဆွဲ…..ရုံးခန်းလည်း ရှာ. အလုပ်ကတော့ အရမ်းရှုပ် ပေါ့ဗျာလူတွေ ခေါ်ဖို့ အတွက်လည်း… ပြင်ဆင်သတင်းစာထဲမှာ ကြေငြာထည့်ဂွင်ကတော့ တကယ့်ဂွင်ဘဲဗျာ။ ကျနော်ကို ငှားပေးထားတဲ့ လုံးချင်း အိမ်မှာ ကျနော် တစ်ယောက်တည်းလေ…..။အင်တာဗျူးလုပ်တော့ လာလိုက်ကြတဲ့ လူတွေ အများကြီးဘဲဗျာ..။ကျနော်တို့ကုမ္ပဏီကလစာ ကောင်းတယ်ဆိုလို့ လာလျှောက်ကြတာ….ဒီစာဖတ်တဲ့ အထဲတောင် ပါအုံးမလား မသိဘူး….. ဆောရီးပါဗျာ………. အဲဒီတုန်းက ကျနော် နှာဗူးကျခဲ့လို့ တချို့ဆို တော်လျှက် နဲ့ အရွေးမခံခဲ့ရဘူး။ စာလည်း ဖတ် ပညာလည်း ရအောင် နည်းနည်း ရေးပြရင်းနဲ့ စာရှည်သွားမှာလည်း စိုးရိမ်ရတယ်။ဖြတ်ပြီးဘဲ ပြောလိုက်တော့မယ် ဗျာ…..။အဓိကကတော့ အတွင်းရေးမှူး အရင် ရှာရတာဘဲ… ဒါမှ ကျနော့် အတွက် ဝန်ပေါ့မှာ ဆိုတော့..။လာလျှောက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကို အကုန်မေး တယ်..။. မြန်မာဝတ်စုံ ဝတ်လာတဲ့ ကောင်မလေးတွေ…ရှက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေ ဆို………ကျနော် အင်တာဗျူးလုပ်တာ ဆယ်မိနစ် မကြာဘူး…။ ခေတ်ဆန်ဆန်နဲ့…အပြောအဆို ရဲတဲ့ ကောင်မလေးတွေနဲ့ဆို အင်တာဗျူး လုပ်တာ ပိုကြာတယ်။
ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆုံး ဆယ်ခါတင် ၅ ယောက်ကို second အင်တာဗျူး ခေါ်လိုက်တယ်။မခေါ်ခင် စိတ် စမ်းလိုက်တယ်..။ ကျနော် အလုပ်များနေလို့ ဒီကို အင်တာဗျူး မတိုင်ခင် စနေ တစ်ရက်လောက် လာကူပေးပါလားဆိုတော့..။ ခပ်မိုက်မိုက် ကောင်မလေး နှစ်ယောက်က NO တဲ့..နောက် နှစ်ယောက် ကတော့ အင်တင်တင်ဘဲ..။ ကျနော့် အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာမယ့်တစ်ယောက်ကတော့ yes တဲ့။ သူက ပေးဆပ်ခြင်းနဲ့ စ လို့ ကျနော်သူ့ကို ၈၅ % ရွေးဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်…။ ဒီလိုနဲ့ ချိန်းထားတဲ့စနေနေ့ ရောက်တော့….မမ ရောက်လာတယ်…။ ကျနော်လည်း အလုပ်လျှောက်လာတဲ့ ဖိုင်တွေထဲကသူ့ရာထူးနဲ့ သူ အဆင်ပြေမယ့်သူလေးတွေကို ရွေးထုတ်ခိုင်းတာပေါ့….။ မမက အရင်က HR မှာလည်းလုပ်ဖူးတော့ လုပ်တာ မြန်တယ်ဗျာ……..နှစ်နာရီလောက် လုပ် လိုက်တော့ ပြီးသွားတယ်။ ဒါနဲ့ဘဲ အဲဒီအချိန်ကတော့ ………..ငွေကလည်း ပေါ တစ်ယောက်တည်း သမားဆိုတော့ ပိုက်ဆံလည်း သိပ်မနှမြောတတ်ဘူး လေ။မ က မနက် အစောကြီး ရုံးကို ရောက်လာတယ်…….ကူညီပေးစရာရှိလုပ်ထားပေးရအောင်တဲ့…။ ဒီနေ့လည်း မကို ကြည့်ရတာ လှနေတာဘဲ သတိထားမိတာက အပေါ်က ကုတ်အကျီလေးက မပြောင်းသွားဘူး ဘယ်သူမှလည်း မရှိတော့ ……..မကို နမ်းခွင့်တောင်းပြီး ကစ်စင် ပေးလိုက်တယ်။
နောက် အင်တာဗျူး စလုပ်တယ်။ထုံးစံ အတိုင်း အတွင်းရေးမှူးတွေ လုပ်ရမယ့် အသေးစိတ် အလုပ်လေးတွေ ရှင်းပြတယ် နယ်လည်း တခါတလေ သွားရ မယ် ညဘက် ဒင်နာတွေ ဘာတွေရှိရင် လိုက်တက်ပေးရမယ် အပြောအဆို အမူအယာလည်း ရဲရင့်ရမယ် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နဲ့ လူမှု ဆက်ဆံရေးလည်း ကောင်းရမယ် ဆိုတော့နှစ်ယောက်ကတော့ နယ် မသွားနိုင်ဘူးတဲ့ နောက်တစ်ယောက်ကလည်း နယ်တော့ သွားနိုင်ပါတယ်။ သူ့အတွက် မိန်းကလေး အဖေါ် ပါရင်တဲ့တစ်ယောက်တော့ အစ်ကို က လူမှု ဆက်ဆံရေး ပွင့်လင်းရမယ် ဆိုတာ ဘယ်လောက် ပွင့်လင်းရမှာလည်းတဲ့ သူလေးလည်း ချစ်စရာလေးဘဲဒါနဲ့ သူနဲ့ စကားတွေ အများကြီး ဆက်ပြောဖြစ်တယ်ရာထူးအတွက်က မ အတွက် လျာထားပြီးသား ဖြစ်နေလို့ သူကို စိတ်ကျေနပ်အောင် စကားတွေ ထိုင်ပြော ဖြစ်တဲ့ သဘောပါဘဲ။ စကားပြောရင်းက သူက သူ့ ကလပ်တွေလည်း တက် နည်းနည်း ပွေချင်တာလေးတွေ သိလာရတယ်….။ခဏနေတော့ သူနဲ့ စကား လက်စသတ်ပြီး ဒီအလုပ်နဲ့ မဟုတ်တောင် အပြင်မှာ မိတ်ဆွေတွေ လုပ်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းရယ် ဒီည အတွက် ညစာကျွေးမယ်လို့ သူ့ကို ဒိတ်လုပ် လိုက်တယ်။နောက်တော့ မ အလှည့် မနဲ့ကတော့ နည်းနည်း ရင်းနှီးပြီးသား ဆိုတော့ …..ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဘဲ ပြောဖြစ်တယ်။
မ လစာ ဘယ်လောက် လိုချင်လည်းဆိုတာ ညှိပေးမယ်….နောက် မ အတွက် လုပ်ရမယ့် အလုပ်သဘောတရားတွေကို သေချာ ရှုင်းပြတယ်..။ကိုယ့်ရဲ့ဘေး မှာ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ အတွင်းရေးမှူးမမလေး ရှိတာ အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုပျော်တယ်ဗျ တကယ်ပြောတာ လုပ်ငန်းခွင့် တိုးတက်ချင်ရင်………… ဘေးမှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့ လူတွေ ရှိနေရင် ပိုကောင်းတယ်။ ပြောစရာရှိတာ ပြောပြီး မကို မနေ့က ဝယ်ထားတဲ့ ဖုန်းလေး ထုတ်ပေးတော့မ အရမ်းပျော်သွားတဲ့ ပုံစံ လေး……….ပြီး မှ အားနာတဲ့ ပုံစံနဲ့…….မောင်လေးကလည်းကွာ အဲဒီလောက်ကြီး မလိုသေးပါဘူးဟုတ်ဘူးလေ မရဲ့ အလုပ်ခန့်လိုက်ပြီဘဲ ကျနော်နဲ့ စကား အမြဲတမ်း ပြောဖို့ အတွက်ရယ်ဆက်သွယ်ရတာ လွယ်ဖို့ အတွက်ရယ် ဖုန်းရှိမှ ဖြစ်မှာလေ။ စကားသာ ထိုင်ပြောနေရတာ မကို အခန်းထဲ ခေါ်ပြီး ဆွဲချင် လှပြီ မကို ဖက်ထားပြီး အချစ်အကြောင်းတွေ ပြောမိသေးတယ် ခဏနေတော့ ကစ်ဆင် ထပ်ဆွဲပြိး နှစ်ယောက်လုံး လိုလားတဲ့ အရာကို စတင်လိုက်တယ် ကျနော်လည်း တခါမှ မလုပ်ဘူးသေးလို့ စမ်းကြည့်ချင်နေတာ အလုပ်စားပွဲပေါ် မတင်ပြီး…သူ့ စကဒ်လေး လှမ်းပြီး ဂျာတဲ့ အရသာ တကယ်ကောင်းတယ် ဗျာ ပင်တီလေးတောင် မချွတ်ဘူး ဆွဲလှန်ပြီး ဂျာတော့သာ မက လူသာ မချမ်းသာတာ သန့်နေတာဘဲဗျာ။ အဖုတ်ဖောင်းဖောင်းလေးကို ဆွဲဟပြီး အတွင်းသားလေးကို စိတ်ပါလက်ပါ လျှာနဲ့ လျှက်ပေးမှတော့ ဘယ်ခံနိုင်မှာလည်းးဗျာ ကျနော့် ဆံပင်ကို ဆွဲကိုင်ပြီး မရဲ့ ခါးက ကော့ကော့တက်လာတာ အဲဒီ အခွေကို ခုထိ ပြန်ကြည့်ရင်းဖီးတက်နေတုန်းဘဲ နောက်တော့ ကျနော်လည်း မနေနိုင်ဘူး သူ့ကို စားပွဲပေါ်မှာဘဲ လိုးလိုက်တယ် ပထမ အစတော့ နာ တယ်တဲ့ နောက်တော့ သူလည်း အရမ်းကောင်းလာလို့နဲ့ တူပါတယ်မက အရမ်းအော်တယ် သိလား လုပ်ရင် အော်တတ်တဲ့ ဆော်တွေကို လိုးရတာ ပိုပြီး ဖီး လ်ရှိတယ်။
အဲဒီနေ့က မှတ်မှတ်ရရ သုံးခါလောက် လုပ်လိုက်တယ် ညနေစောင်းတော့ ထုံးစံ အတိုင်း ညစာ အတူသွားစားမယ် ဆိုပြီး မ ရဲ့ အိမ် အတွက်ပါ ဝယ် ပေးလိုက်တယ် ဆိုင်မှာ မကို ဖုန်းသုံးပုံ သုံးနည်းလေး နည်းနည်း ပါးပါး ပြပေး အိမ်ထိ ပို့ပေးပြီးကျနော် ပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်ပြန်ရောက်တော့မှ စော်လေးနဲ့ ညစာစားမယ်လို့ ချိန်းထးတာ သတိရပြီး သူ့ကို ဖုန်းဆက် အလုပ်များနေလို့ပါ ဆိုပြီး တောင်းပန် အခုလာပြီ ဆိုပြီး သူ့ဆီ အမြန် ပြေးသွားရတယ်။ သူက ဘဲကင် စားချင်တယ်ဆိုတော့နီးနီးနားနား.က ရွှေဘဲမှာဘဲ သွားထိုင်လိုက်တယ် ဘဲကင် တခြမ်းမှာပြီး ကျနောက် ဘီယာသောက်တော့ သူလည်း သောက် မယ်တဲ့ဒီကောင်မလေးကလည်း တော်တော် ချစ်စရာ ကောင်းတာဘဲနဲ့လည်း ကွဲသွားတာ သိပ်မကြာသေးဘူး သူ့ဘဲက နိုင်ငံခြား သွားလို့သာ ကွဲသွားတဲ့ ပုံစံ မျိုးပါ။ သူလည်း သောက်နိုင်သားဗျာတစ်ယောက် သုံးလုံးလောက် ကုန်တော့ကလပ် ကို ဆက်သွားမယ် ဆိုပြီး သွားကြတယ်။ ကျနော်က မကတတ်ဘူးဗျာ သူက ကချင်တယ်ဆိုလို့ သူ့ကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီး ကျေန်ာက ပုလင်းထောင်လိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း စားပွဲမှာ ပုလင်းထောင်ထားပြီဆို မိန်းကလေး တွေက လာထိုင်ချင်ကြတယ်လေ။ကျနော်လည်း ပျင်းတာနဲ့ လာထိုင်တဲ့ ကောင်မလေးနဲ့ တော်ကီပွားနေတော့မရွှေချောက ရောက်လာပြီး ဝုန်းပါလေရော ဒါနဲ့ ကျနော်က……ချစ်လေးကလည်းကွာ ကိုကိုက ရိုးရိုးစကားပြောတာပါ စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဆိုပြီး ခေါင်းတွေ သပ်ပေးလိုက်တော့ ငြိမ်သွားတယ်။ ဒါနဲ့ နှစ် ယောက် ထိုင်ပြီး ဆက်သောက် ဆယ်နှစ်နာရီလောက်ကျမှ ကဲချစ်လေး ဘယ်ပြန်မှာလည်း…… ကိုကို လိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုတော့ ဒီအချိန်မှတော့ အဆောင် လည်း ပြန်ဝင်လို့ မရတော့ဘူး ကိုကို သွားတဲ့ နောက် လိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ပြသနာက အဲဒီမှာ စတာ…………. driver ပါနေတော့ အိပ်ကို မခေါ်သွားချင်ဘူး လေ ဒီလိုလုပ် ချစ်လေး……ကိုကို ဟိုတယ်မှာ အခန်းယူပေးထားမယ်ကားသွားထားပြီးရင် ကိုကို ပြန်လာခဲ့မယ် ဒီလိုနဲ့ အပြန်လမ်းကြမှ မ ကို ဖုန်းဆက်ဖို့ သတိရတယ်။
ဒီအချိန်ကြီး ဆက်ရင်လည်း မကောင်းပါဘူး ဆိုပြီး sms အတိုလေး လှမ်းပို့လိုက်တယ်အလုပ်များနေလို့ ဖုန်း မခေါ်ဖြစ်တာ ..အိပ်နေပြီလား ဆိုတော့ သူ့ဆီ က ချက်ခြင်း ဖုန်း ပြန်ဝင်လာတယ် မောင်လေးဆီက ဖုန်းကို စောင့်နေတာတဲ့ ဒါနဲ့ သူ့နဲ့ ခဏဖုန်းမှာ ကြွေပေးတော့ ကားဆရာက ပြုံးစိစိနဲ့ ဒါနဲ့ driver ကို မုန့်ဖိုး ပေးပြီး တက္ကစီနဲ့ ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်။ကျနော်လည်း သူ့ထွက်သွားတာနဲ့ တံခါး ပိတ်ချင်ယောင်ဆောင် ၊ သူလည်း ပျောက်သွားရော ချစ်လေးဆီ ပြန် ပြေးရတာ။ မောလို့ မောမှန်းတောင် မသိဘူး ဇာကပ်နေတာကိုး ဟိုတယ်လည်း ရောက်ရော သူ့အခန်းကို ကမန်းကတန်း ပြေးရတယ် တော်ကြာ အိပ်ပျော် သွားရင် နေကောင်းသွားမှာ စိုးလို့လေ။ရောက်ရောက်ချင်းတံခါးခေါက်တော့အထဲက ဘယ်သူလည်းတဲ့ကိုကိုပါ ဆိုမှ ဖွင့်ပေးတော့ သဘက်လေး ပတ်ထား သူရေချိုးခန်းထဲမှာ မျက်နှာသစ်ပြီး ထွက်လာတာတဲ့ သူက ရယ်ဒီဆိုတော့ ကိုယ်လည်း အဆင်သင့်ဘဲပေါ့သူ့ကို ဖက်.ကစ်ဆင်လေး ဆွဲပြီး ခုတင်ပေါ် ပက်လက် လှန်ခိုင်းလိုက်တယ်ချစ်တော် ချစ်တဲ့ ပထမဆုံးမမ သင်ပေးလိုက်လို့အခုဆို မနေနိုင်ဘူးဗျာမဂျာရရင် မပြည့်စုံသလိုဘဲ။ သူက ပြောတယ်မဂျာ ဘဲ လုပ်ရင် ဖီးလ်အပြည့်လာဖို့ မလွယ်ဘူးတဲ့……..ချစ်တဲ့ စိတ်ကြောင့်သာ လိုက်လျောပေးလိုက်ရတာသူ့တို့ ဖီးလ် အပြည့်ရဖို့ ဂျာပေးမှ ပိုကောင်းတာတဲ့။ သူက အမွှေးလေးတွေ ရိပ်ထားတာဗျအမွှေးရိတ်ထားထားလို့ ကြမ်းရှရှနဲ့ကလည်း တမျိုး အရသာ ရှိတယ်။ အစိလေးကို စုပ်ပေးလိုက်အတွင်းသားလေး ကို လျှာလေးနဲ့ ထိုးလိုက်အပြင် နှုတ်ခမ်းကို ပွတ်ဆွဲလိုက်နဲ့အစိကို စုပ်ရင် အရမ်း မစုပ်နဲ့နာတတ်တယ်ခပ်ဖွဖွလေး စုပ်ပေးပြီး လျှလေးနဲ့ ပွတ်ပေးကြည့် ဘယ်မိန်းမ မ တောင့်မခံနိုင်ဘူးခဏလေးနေတော့ သူ့ ဆတ်ကနဲ ဆက်ကနဲ တွန့်သွားပြီးပြီးသွားတယ် သေချာတယ် ဒီစော်လေး ဒီကိစ္စ အတွေ့အကြုံနည်း သေးတယ်ဒါမှ မဟုတ် သူ့ဘဲက ကောင်းကောင်း ပြုစုတာ မခံဘူးတဲ့ သူဘဲ ဖြစ်မယ်ဆိုတာ ဒတ်ထိ သိလိုက်ပြီလေ။
ဒါနဲ့ သူဘေးနားမှာ ဝင်လှဲပြီး ကစ်စင် ဆွဲလိုက် နို့အုံလေးချေလိုက်နဲ့တစ်ယောက်တည်း အလုပ်များနေတုန်း သူက ကျုနော့် ကို ပြုစုချင်တယ် ဆိုလို့ ခွင့် ပေးလိုက်တယ်။သူ မှုတ်တာတော့် တော်တော် ကောင်းတယ်ဗျာသူ့ဘဲကို လုပ်ပေးနေကြတဲ့သူ့ဘဲကတော့အပြုအစု ကျနော့် လောက် မကောင်းဘူး တဲ့ နောက်ပိုင်း သူနဲ့ အရမ်း ပွင့်လင်းသွားမှ ပြန်ပြောပြတယ်။ သူ့အဖုတ်လေးကို ဒစ်လေးနဲ့ ပွတ်လိုက် နို့လေးကို ဆွဲလိုက်နဲ့သူပြန်ပြီး စိတ်အရမ်းပါလာအောင် နူးတော့ သူခါးလေးက အလိုက်သင့်လေးလီးကို လိုက်လိုက် တည့်ပေးတယ် မခံနိုင်တော့ဘူးဗျာအသာလေး ထည့်ကြည့်လိုက်တယ်…….. အိုး စီးနေတာဘဲ ဗျာ။ကောင်းလိုက်တာစိတ်ထဲက ထင့်ကနဲတော့ ဖြစ်သွားတယ်သူ့ထဲက အရည်တွေ ကျနေတာတောင် ကျနော့်ဟာ မချေင်သွားဘူး.ဒါနဲ့ မှိန်းပြီး လိုးပေးရင်း ကသူက မြန်မြန်စောင့်ပေးပါတဲ့ ကျနော်လည်း အားရပါးရ စောင့်ပေးလိုက်တယ်။ အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ သေချာသွားပြီသူပြီးသွားတော့ကျနော့်ကောင် ကို ဆွဲစုပ်နေလို့ ကျနော်လည်း မရှေးမနှောင်းဘဲထွက်သွားတယ် သူ့မှာ မျှော့ပါတယ်ဗျာ တကယ့် ရှားပါး ပစ္စည်း။ကျနော့် တသက် လိုးပေးဘူးတဲ့ မိန်းမ တွေ ရာကျောနေပြီ နှစ်ယောက်ဘဲ မျှော့ပါတာ ကြုံဘူးတယ်။ချစ်လိုက်တာ ချစ်လေးရယ်စကားလည်း ပြော သူ့ကို ယုယုယယလေး ထွေးပွေ့ပြီးနဖူးလေး ကို နမ်းတော့သူ့ မျက်ဝန်းမှာ မျက်ရည်လေးတွေ တွဲနေတယ်။
ချစ်လေး ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့သူ့ရည်းစားက သူ့ကို သစ္စာဖောက်သွားတော့ မခံချင်တာနဲ့ သူလည်း ကျနော်နဲ့ အိပ်လိုက်တာတဲ့အဲဒီကောင် ဘယ်လောက် အသုံးမကျလည်း ဆိုတာ မသိဘူး……မျှော့ပါပြီး ဒီလောက် ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ စော်ကို ပစ်သွားတယ်ဆိုတော့ တကယ့် ငတုံးလို့ စိတ်ထဲ ကတော့ ကျိန်ဆဲမိတယ်။ ချစ်လေးရယ်…..ကိုကို တစ်ယောက်လုံးရှိနေပြီဘဲ.မေ့လိုက်တော့ကွာ ကိုကို က ချစ်လေးကို အမြဲချစ်နေမှာ ပါ ဆိုတော့သွားပါ တဲ့လူကို လုပ်ပြီးမှ ရည်စားစကား လာပြောတယ်ပထမ အင်တာဗျူး တုန်းကတော့ မျက်နှာသေကြီးနဲ့တဲ့ ရီလိုက်တယ် မိန်းကလေးတွေ ကိုယ့်ကို တကယ် ချစ်စေချင်ရင် သူတို့ကို ရီအောင် လုပ်လိုက် ဘယ်လောက်ဘဲ စိတ်ကောက်နေတဲ့ ချစ်သူ ဖြစ်ပါစေဟာသတွေ ပြောပြီး ရီအောင် လုပ်လိုက်ရင် ပြန်ကြည် သွားတာ မျာတယ်။သူ့နဲ့ စကားပြောရင်းက ဗိုက်ဆာတယ်တဲ့ဟိုတယ်ကို လှမ်းမေးကြည့်တော့ မရတော့ဘူးတဲ့ သူက မရဘူးဗျာ……..ဇွတ်ဒါနဲ့ ဘယ်မှ ဒီ အချိန် စားစရာ ရနိုင်မလည်း ဆိုတော့ သူက ..သိမ်ကြီးဈေးဘက် မှာတော့ ရလောက်ဆိုလို့ တက္ကစီ ဌားပြီး ပြန်ထွက်ခဲ့ရတသေးတယ်ကားပေါ်ရောက်တော့ ကျနော့် ပုခုံးပေါ် ခေါင်းလေးတင်ထားတဲ့ သူ့ကို ဖက်ပြီးအဖုတ်လေးကို ကားသမား မသိအေငာ် ထပ်ပွတ်ပေးသေးတယ်……….. ငါး မိနစ်လောက်နေတော့ သူက လက်ကို အတင်းဆုပ်.နား နားကို ကပ်ပြီး မြန်မြန်တဲ့ဘယ်ရမလည်းဗျာအမြန်လုပ်ပေးလိုက်တာတွန့်ပြီး သူပြီးသွားတယ်။ သိမ်ကြီးဈေးနားမှာ ထမင်းကြော်စားပြီး..ဟိုတယ်ကို ပြန်ရောက်တော့ ၁ နာရီခွဲတော့မယ်။တကယ့်ချစ်သူတွေလိုဘဲဟိုတယ်ရောက်တော့ ရေခဲသတ္တာထဲက ဘီယာထုတ် သောက်ပြီးစကားပြောလိုက်ဆက်ဆွဲလိုက်နဲ့ . လေးချီ လုပ်ဖြစ်တယ်လုပ်တဲ့ အချိန်တိုင်း ဆွဲစုပ်ထားတဲ့ သူ့အဖုတ်လေးထည်က ပြန်တောင် မထုတ်ချင်ဘူး ဗျာ စိမ်လို့လည်း ကောင်းတယ်တချို့ အဖုတ်တွေဆို စိမ်လို့ မကေငာ်းဘူး ပူတယ်။
မနက်လင်းတော့လည်း လင်မယား ကျနေတာဘဲ…….တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် အနမ်းတွေနဲ့ နိုးထပြီး……သူ့ကို တချီလောက် ချစ်ပြလိုက်သေးတယ်ပြီး တော့မှ break fast တူတူ သွားစား…..ပြီးတော့ သူနဲ့ အတူ ဘုရားသွားဖူးလိုက်သေးတယ်။ကျနော့်ဘဝမှာ ထူးဆန်းတာက မိန်းကလေး နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ် ကို တပြိုင်တည်း ရတာများတယ်အပြန်ကြတော့ city mart ခဏဝင်ပြီး ဝယ်စရာ ရှိတာ ဝယ်ပြီး အိမ်ကို သူ့ကိုပါ ခေါ်လာခဲ့တယ်..။ နေ့လည်စာ က သူက လက်စွမ်းပြချင်တယ်ဆိုလို့ သူ့ကို ချက်ခိုင်းလိုက်တယ်။ နောက်တခု ပြောရအုံးမယ်ကျနော့် ချစ်သူတွေကို ကျနော်က ကိုယ်တိုင် အတွင်းခံ စိတ်ကြိုက် ဝယ် ပေးလေ့ရှိတယ်.ဗျ..ညနေကျရင်တော့ MK သွားပြီး သူ့အတွက် ……. တခုခု ဝယ်ပေးအုံးမှဘဲ ဆိုပြီး…… စိတ်ကူးထားတာ တခါတလေတော့လည်း အဲဒီ ဘဝလေးကို ပြန်လွမ်းသေးတယ်။ တယောက်တည်း ဆိုတော့ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ် ချုပ်ချယ်မဲ့သူလည်း မရှိ ရည်းစားဆိုလည်း စိတ်ကြိုက်ထားကျနော်စည်း တခုတော့ထားတယ်သူမကြည်ဖြူဘဲ ဘယ်မိန်းကလေးမှ အတင်း မလုပ်ယူဘူး သူနေ့လည်စာ ချက်နေတုန်း အပြင်ထွက်မနဲ့ ကြူ လိုက်သေးတယ် မက လည်း ဖုန်းရလို့ ပျော်နေတာလေသူ့ အလုပ် အသစ်ရတယ်ဆိုတော့ သူ့ မိသားစုတွေပါ ပျော်နေကြတာ။မရဲ့ညီမလေးကလည်း တကယ့် အငုံးလေးဗျ…… စားချင်စရာလေးသူကပါ ဘေးက လှမ်းဝင်ပြောနေတာ တွေ့တယ်သူ့အမေကလည်း ထမင်း ဖိတ်ကျွေးချင်လို့တဲ့။
တနလ်ာနေ့ ရုံးကို လာခဲ့ဖို့ ပြောပြီးမနဲ့ စကားဖြတ်လိုက်တယ်။ ချစ်သူ ချစ်ကျွေးတဲ့ နေ့လည်စာ စားပြီးတော့တီဗွီလေးကြည့်လိုက်သူ့အဖုတ်လေးနိုက်လိုက် နိုလေးချေပေးလိုက်နဲ့တကယ်ပြောတာချစ်သူနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အောကားကြည့်ရတာ အရမ်းကောင်းတယ်သူ့တို့ဆီက ပညာတွေ အများကြီးရ ခဲ့လို့ ကျနော့်ဘဝမှာ မိန်းကလေးတွေဆီက အချစ်ကို ရခဲ့တာလေ။ ချစ်လေး ဗွီဒီယိုထဲက အတိုင်း စမ်းကြည့်ရအောင် ဆိုတော့ သူက အလိုက်သင့်လေး ကုန် ပေးတယ်ဆိုဖာပေါ်မှာ မှောထားတဲ့ သူ့တင်လေးတွေကို ကိုင်ပြီး နောက်ကနေ ဂျာပေးလိုက်တယ် ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ အဖုတ်လေးထဲ လီးထည့်ပြီး အားရပါးရ စောင့်ပေးလိုက်တယ်သူက သူ့ကြမ်းမှ ကြိုက်တာသူ့အသားနာလာလေ…….သူက ပိုပြီး ဖီးလာလေဘဲအဲဒါဟာ စိတ်ရောဂါ တမျိုးဆိုတာ နောက်ပိုင်း စာ တွေ ဖတ်မှ သိရတယ်။ အဲဒီလို စော်မျိုးက သူ့ကို ယုယပြီး နုနုရွရွ ချစ်ပြတဲ့ ဘဲတွေ ဆို အသေမုန်းသွားတယ်။ကျနော်လည်း သူ့တင်ပါးကို ရိုက်လိုက်လိုး လိုက် ကောင်းလည်းကောင်း.နို့ကို ဆွဲလိုက် လိုးလိုက်နဲ့ ခေါင်းလေးကို လှမ်းကိုင်တော့ဆံပင်ပါ ဆွဲပြီးလုပ်တဲ့.ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးဒါနဲ့ လက်တဖက်က ဆံပင် ဆွဲပြီးတဖက်က ဖင်ကြီး ကိုင်ပြီး စောင့်တာ……. အသားချင်းရိုက်သံက အရမ်းမိုက်တယ်။ ကိုလည်း သူ့ကောပေးနေတာကို ကြည့်ပြီး ပိုပိုပြီး ဖီးလာတယ်။ ဒါနဲ့ လက်တဖက်ကို တံတွေးဆွတ်ပေးပြီး ဖင်ခေါင်းလေးပါ ချဲ့ပေးတော့အို ကောင်းလွန်းလို့တဲ့ မြန်မြန် လုပ်ပါ ဆိုတာ ချည်းဘဲ ဒါနဲ့ ဆယ်မိနစ်လောက် ကြ တော့ ပြီးသွားတယ်……သူနဲ့ ပြီးတိုင်း ကျနော် ချက်ခြင်း ဆွဲမထုတ်ဘူးသူစွဲစုပ်တာလေးကို ခံလို့ကောင်းလို့။ခဏနေတော့ မဆီက ဖုန်းလာတယ်…….ညနေ လာခေါ်ပါလားတဲ့ တွေ့ချင်လို့တဲ့။ အင်း လာမယ်ပြောပြီး ဖုန်း အမြန် ဖြတ်လိုက်ရတယ်.ချစ်လေး သိသွားမှာ စိုးလို့ ကျနော်က ချစ်လေးကို ချစ်လေးကို တော့ ကိုကို မခိုင်းရက်ဘူးကွာသင်တန်းထက်တပ်လိုက်……ကိုကို ထားပေးမယ်ချစ်လေး အလုပ် မလုပ်နဲ့အုံးဆိုတော့ သူကလည်း အိုကေတဲ့ ။သူ့ကို အဲဒီ အချိန်က နံမည်ကြီး management လို ဖြစ်နေတဲ့ ABE advance diploma တက်ခိုင်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်း သူနဲ့ ကျနော် တစ်ပါတ်ကို နှစ်ရက် လောက်တော့ လုပ်ဖြစ်ကြတယ်။
ကျနော်က ကျနော်ချစ်တဲ့ မိန်းကလေးတိုင်းကို ပိုပြီး အောင်မြင်စေချင်တယ်ဒါကြောင့် သူတို့ လိုအပ်တာ မှန်သမျှ ထောက်ပံ့ပေးချင်တယ်ဗျာ ကိုယ်တတ်နိုင် တာ ဆို သူ့တို့ကို လုပ်ပေးလိုက်တယ်။ချစ်လေး ဝင်ရှုပ်သွားတာနဲ့ မမနဲ့ ဇတ်လမ်း နည်းနည်း ပြတ်သွားတယ်။မမ ဖုန်းခေါ်ထားလို့ ညနေ ပြေးတော့မယ် ဆို တော့ သိတဲ့ အတိုင်း ကားမမောင်းတတ်တဲ့ ကျနော်က ကားကြီးကို ထားပြီး တက္ကစီနဲ့ ပြေးရတာပေါ့သူတို့ လမ်းထိပ်ရောက်တော့သူ့ကို ဖုန်းဆက်ရသေး တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း လမ်းတွေမှာ လမ်း ဆိုင်းဘုတ်က ရှိတာ မဟုတ်ဘူးအိမ်နေရင်း ဝတ်စုံလေးနဲ့တောင် မက ထင်းနေတာဘဲ….ကမန်းကတန်း ထလာတာ ဖြစ်မယ်ဆံပင်လေး ဘိုသီဘတ်သီ ဂါဝန်လေးနဲ့မ က သူ့အိမ်ကို ခေါ်သွားပြီး မိတ်ဆက်ပေးတယ်သူ့အလုပ်က ဆရာပေါ့သူ့အမေနဲ့ အဖွားကအံ့သြလို့မရဲ့ ဆရာဆိုတော့ အဖိုးကြီးလို့ ထင်နေတာတဲ့ငယ်ငယ်လေးနဲ့တော်လိုက်တာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ ရှက်တာပေါ့ဗျာဟဲဟဲသူ့အမေနဲ့ အဖွားကို စကားတွေ အများကြီးပြောဖြစ်ခဲ့တယ်။ အများစုကတော့ သူတို့ ပြောတာပါ မ ရဲ့ အဖေ သေပြီး နောက်ပိုင်း မ ကိုဘဲ အားကိုးနေရတယ် ဆိုတဲ့ကိစ္စရယ် ကုန်ကျစရိတ် က ကြီးလာလို့ စားဝတ်နေရေး ကျပ်တည်းတယ် ဆိုတာ ဒါနဲ့ ကျနော်ကလည်း မ အနေနဲ့ အခုဆို လစာ ငါးရာကျော်လောက်ဆိုတော့ငါးသိန်း နီးပါလောက် ရ မှာပါအခြား အပိုတွေ ဘာတွေနဲ့ ဆို ခြောက်သိန်းလောက်တော့ ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ ကျေးဇူးကြီးပါတယ် မောင်ရင်ရယ်တဲ့သူတို့ အိမ်မှာ ထမင်းစားဖို့ ခေါ်နေ သေးတယ်။သူတို့ မိသားစု စားဖို့ ချက်ထားတာလေး ကျနော်စားလိုက်ရင် သူတို့ ကိုယ်တာ လျော့သွားမှာ သိလို့ ဗိုက်မဆာသေးဘူးဆိုပြီး အတင်းငြင်းခဲ့ရ တယ်ကျနော့်ဘဝက ငယ်ငယ်က အရမ်း ဆင်းရဲတယ် ဆိုတာ သူတို့ကိုတော့ မပြောပြခဲ့ဘူး။မကို ပြန်တော့မယ်ဆိုတော့ မကပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်တဲ မောင်ဒီ နေ့ မ ကို မနမ်းရသေးဘူးနော် လူလည်း မလစ်ဘူးတဆိုင်ဆိုင်သွားရအောင်တဲ့မကလည်းကွာ ဆိုင်မှာဆို မလွတ်လပ်ဘူးဟိုတယ် ခဏသွားမယ်လေဆို တော့ သဘောဘဲ လို့ ဆိုတာနဲ့ ကားဆရာကို အနီးဆုံး ဟိုတယ်ကို ပို့ခိုင်းရတယ်။
ဟိုရောက်တောက တဆက်ရှင် ယူပြီး.ကျနော်က ဘီယာသောက်..မက အအေးသောက် စကားပြောလိုက် နဲ့ နည်းနည်း အရှိရလာတော့မှ မကို နူးပြီး တချီ လော်က ဆွဲလိုက်သေးတယ်.နေ့လည်က လုပ်ထားလို့လား မသိဘူး….တော်တော် ကြာတယ်ဗျ မရဲ့ အသံဆို….အပြင်က သေချာပေါက် ကြားလောက် တယ်။မကို လည်း ချစ်တယ်ချစ်လေးကိုလည်း ချစ်တယ်မ ညီမလေးလည်း ချစ်မိနေမလား မသိဘူး အဲဒီကောင်မလေးကလည်း မျက်လုံး အရမ်း ကစား တယ်။ ည ၈ နာရီလောက် ကျတော့ အပြင်ထွက် တခုခု စားပြီး မကို လမ်းထိပ်အထိ ပြန်လိုက်ပို့ပေးလိုက်တယ် အိမ်အပြန်လမ်းကြမှ ချစ်လေးကို သတိရ တော့ ဖုန်းထဲမှာ သူ့ miss call တွေ အများကြီးဘဲsms လည်း ပို့ထားသေးတယ် ဒီလောက်ခေါ်နေတာတောင် ဖုန်းမကိုင်ဘူးနော်တဲ့ဒီလိုပါဘဲ လိုချင်တာ ရ တော့ဆိုတော့ သူ့ကို မနည်းပြန်ချော့ရသေးတယ်။ လုပ်ငန်းခွင် ဝင်တော့မှ မရဲ့ အစွမ်းအစကို ပိုသိလာရတယ် သူက ရာထူးကြီးကြီး မလုပ်ဘူးပေမယ့် အလုပ်လုပ်တာတော့ အတော်လေး စေ့စပ်တယ် အတွင်းရေးမှူးး သင်တန်းလည်း တက်ခိုင်းအင်္ဂလိပ်စာလည်း တက်ခိုင်း သူလည်း အရမ်း ပင်ပန်းပါတယ်။ ကောင်းကေင်းတောင် မနားရရှာဘူး။လူမိုက် ကံကော်ငးတယ် ပြောရမလား မသိဘူးဗျာ နေပြည်တော်မှာ တင်ဒါ တင်တာ ကျနော့် တို့ ကုမ္ပဏီက အလုပ် ကြီး တခုရတယ်။ထုံးစံ အတိုင်း ခိုင်းလို့ ကောင်းတဲ့ ခိုင်းနွားတွေဆို အသဲအသန်ချီးမွမ်းကြတာပေါ့အလုပ်လုပ်တာ ခြောက်လတေငာ် မပြည့်သေးဘူး projects ကြီး ရတယ် ဆိုပြီး ကျနော့်ဆီ အီးမေးတွေ ပို့ပြီး ချီးမွမ်းကြတယ်။ကိုယ်လိုချင်တာက လစာ ဒီထက် ပိုလိုချင်တာလေစပွန်ဆာက နှစ်ယောက် တောင် ပေးထားရသလို ဖြစ်နေတာ အမေ အတွက်လည်း ရှိသေးတယ်။
နောက် တပါတ်လောက် ကြာတော့ အလုပ်ကိစ္စ စာချုပ်ချုပ်ဖို့ ဟိုက regional director ဘုတ် အဖွဲ့လာကြမယ်ဆိုတော့ ပို အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့.နေပြည်သွား ဖို့ ကားဌားရ..ဟိုမှာ ဟိုတယ် စီစဉ်ရသူတို့ကို Park royal မှာဘဲ ထား လိုက်တယ်။လေဆိပ်သွားကြိုပြီး အပြန်လမ်းမှာဘဲ မင်း အလုပ်လုပ်တာ တော်လို့ ဒို့ အဖွဲ့က မင်းကို လစာ ၁၀၀၀ တိုးပေးလိုက်ပြီ ဆိုတော့ ပိုပျော်ပေါ့ဗျာ။ သူတို့ကို ထားခဲ့ပြီး ပြန်အလာ ကားပေါ်မှာ မ က…. ကျနော့်ကို ကြည့်ပြီး အားကျလို့ တဲ့ စိတ်ကောင်းထားလို့ ကံကောင်းတာ ဆိုပြီး လူကြီးလေသံနဲ့ ပြောသေး မ အိမ်လိုကခဲ့ကွာ…..တူတူ မအိပ်ရတာ ကြာပြီ အိမ်ကို နယ်ခရီးသွားရမယ်လို့ လှမ်းပြောလိုက် ဆိုတော့သူက မညာချင်ဘူးတဲ့ ဒါပေမယ့် သူလည်း တူတူ နေချင်တော့Yes ဆိုတော့ . city mart မှာ သူ့ကို ထားခဲ့ပြီး driver ကို ကိုယ်က လိုက်ပို့ခိုင်း ပြီးတော့ city mart ပြန်သွား…….အလုပ်ကို ရှုပ်နေတာဘဲ။ ညဘက်ရောက်တော့ ထုံးစံ အတိုင်းပေါ့ဗျာ ဒီညက ပိုမိုက်တယ်ဗျာ ကျနော် စမ်းချင် တဲ့ ဆေးကို စမ်းကြည့်တာလေ။ ယောက်ျလေး သဘာဝ video တွေ အကြည့်များလို့လား မသိဘူး ဗွီဒီယိုထဲက ကောင်တွေ ဆေးထိုးထားတဲ့ ပုံစံတွေ မြင် ရင်ကိုယ့်ဟာကိုယ် သေးနေသလို ခံစားရလို့အမြဲတမ်း ပိုပို ကြီးချင်နေတာ နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်းပြန်လာလို့ သူဝယ်လာတဲ့ ဆေးလေး သောက်လူ ဆေးလေးနဲ့ စမ်းကြည့်ချင်နေတာ။ သူတို့ဆီမှာက တရားဝင် ရောင်းတာလေ အကျိုး အာနိသင်ကော .ဘေးထွက် ဆိုးကျိုးကော သေချာ ရှင်းပြပြီးရောင်း တာအခု city mart မှာ ရောင်းနေတဲ့ X Man ဆိုတာ ဈေးကလည်း ကြီး effect ကလည်း ဘာမှ ကောင်းတာ မဟုတ်ဘူး နိုင်ငံခြား website ထဲ ဝင်ရှာ ကြည့်လိုက် ။ top 100 ဆေးထဲတောင် ပါတာ မဟုတ်ဘူး ၂ ဘူးကို ၉.၉၀ USD ဘဲ ရှိတာဒီမှာက သုံးသောင်းခွဲကျော်နဲ့ ရောင်းတယ်။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့က ပွေဖော် ပွေဖက်ဆိုတော့ အလိုက်သိတယ်လေ။အဲဒီနေ့က မကို ဒီဆေး အစွမ်းနဲ့ ချစ်ပေးမယ်လို့ စိတ်ကူးပြီး သူ့ကို city mart ဝင်ခေါ် ဟိုရောက်တော့ Vodka နဲ့ အချိုရည်လေးတွေ ဝယ်ပြီး ကောက်တေး စပ်သောက်မယ် စိတ်ကူးထားတ သောက်ဆေးကတော့ ကြိုပြီး သောက်ထားလိုက် တယ် လူးဆေးကိုလည်း နာရီဝက်လောက် ကြို လူးထားတယ်။ သောက်ဆေးကတော့ ချက်ခြင်း အစွမ်း မပြဘူး လူဆေးကတော့ စွမ်းတယ်ဗျာလူထားတာ ငါးမိနစ်ဘဲရှိသေးတယ် ပူရှိန်းရှိန်းနဲ့ အစွမ်းပြလာပြီ တင်းပြီးမာလာတော့ ပိုရှည်လာတယ် ထင်ရတာပေါ့။ မအတွက် ကောက်တေး ဖျော်ပေးရင်းမီးဖိုးချောင် ထဲ တချီလောက် ဆွဲမယ် စိတ်ကူးထားတာ အိမ်နေရင်းမို့ သဘက်လေး ပတ်ထားတဲ့ သူ့ကို နောက် သိုင်းဖက်ပြီး နို့လေးတွေ ချေ ဆံပင်လေးကို နမ်းလိုက် နားရွက်လေး စုပ်လိုက် လည်းပင်းလေးကို ကစ်ဆင်ဆွဲပေးလိုက်နဲ့သူက ဖင်ကြီးကို ကော့ကော့ပေးတယ်။ ကျနော်လည်း လီးကို ဖင်နှစ်လုံးကြားထဲ တည့် ထားပြီး ဆက်နမ်းတယ်ကာင်းတယ်ဗျ ကားပေါ်မှာ ထောက်ရသလိုမျိုးဘဲ။သူလည်း အရှိန်ရ ကိုယ်လည်း အရှိန်ရရော….သူက ကျနော့်ကောင်လေးကို မှုတ် ပေးမလို့ဆေးလူးထားလို့ မမှုတ်ခိုင်းတော့ဘူး။သူ့ကို ကုန်းခိုင်းပြီး နောက်ကဘဲ ဆွဲထည့်လိုက်တယ်။ဆေးကောင်းရင် လီးက မာပြီး ပိုသန်လာတယ်။
သူကတောင် ပြောသေးတယ် မောင်လေးဆေးက ကြီးဆေးလားတဲ့…ဟိုနေ့ထက် ပိုကြီးနေသလိုဘဲတဲ့ သူလည်း မလုပ်ရတာကြာလို့ ထင်တယ် စကား တောင် သိပ်မပြောနိုင်ဘူး လီးဝင်ပြီး ဆောင့်လိုက်တာနဲ့ အောက်လိုက်တာ ဗွီဒီယိုထဲက အတိုင်းဘဲ။တကယ် လိုးလို့ကောင်းတယ်ဗျာ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ ပုံစံ အမျိုးမျိုးနဲ့ လိုးရတာ အရမ်း အရသာရှိတယ်။ တော်တော်နဲ့ မပြီးနိုင်ဘူး ဆေးကောင်းဝါးကောင်းဆိုတာ အဲဓီလို အစွမ်းပြတယ်။သူ နှစ်ချီပြီ့းပီတဲ့ကိုယ် က ဆွဲလို့ကောင်းတုန်း မောင်လေး မြန်မြန် ပြီးတော့မ မခံနိုင်တော့ဘူး ဆိုမှာ သူ့ကို ပြန်ဂျာပေးပြီး ဖီးလာအောင်ပြန်သွင်း ပြီးမှ သူ့ကို အပေါ်က တက်ဆောင့် ခိုင်းတယ်သူအပေါ်က တက်ဆောင့်တဲ့ အချိန် နို့လေးတွေ ချေပေးလိုက်….ဖင်ကြီးကို ညှစ်လိုက်နဲ့ ငါးမိနစ်လောက်ကြတော့.နှစ်ယောက်လုံး တူတူ ပြီးသွား တယ်။ ကျနော့် သုတ်ရည်တွေ သူ့အဖုတ်ထဲ ပန်းထည့်လိုက်တဲ့ အရှိ အတော်ပြင်းလို့နဲ့ တူတယ် သူ့အဖုတ်လေးက ပွစိပွစိနဲ့ ဆွဲဆွဲညှစ်သလို ခံစားရတယ်။ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ပြီးတာတောင် ကိုယ့်ကောင်က မကျသေးဘူး။သူက ကျနာ့် လီးကြီးကို ဆွဲကိုင်ပြီး လူဆိုးတဲ့ ခုထိ မငြိမ်သေးဘူးဆိုဘဲ သူနဲ့ ကျနော် ကောက်တေးလေး သောက်လိုက်…အမြီးလေး စားလိုက်အောကားလေး တူတူ ကြည့်ရတာ သိပ်အရသာရှိပေါ့နှစ်ယောက်သား သဘက်လေးဘဲ ပတ်ထား တာ ဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကို သူက စပြီး လာမှုတ်ပေးတယ်။ ဆေးကောင်းတာ သုံးတဲ့ အခါ အကြောတွေကပိုသန်လာပြီးဒစ်ကြီးက ပိုကြီးလာသလိုဘဲ အဲဒီ ထောင်လာတဲ့ အကြောတွေက စော် အမြှေးပါးလေးတွေကို ဆွဲဆွဲ ပွတ်သွားလို့ သူတို့လည်း ပိုပြီး ဖီးလ်ရှိတယ်လေ။သူ့နှာခေါင်းလေးတွေ ရဲတွတ်…… မျက်လုံးလေး မှိတ်ပြီး ဆံပင်လေးကို လက်တဖက်က လှန်..ကျနော့်ဟာကို တဖက်က ကိုင်ပြီးအားရပါးရ စုပ်ပေးနေတဲ့ မကို ပိုချစ်လာတယ်ဗျာ။ အဲဒီညက မှတ်မှတ်ရရ ကျနော် သူ့ကို ၇ ခါ ဆွဲဖြစ်လိုက်တယ်။ မနက်လင်းခါနီးမှာ နှစ်ယောက်သား အိပ်ပျော်သွားတာကျနော်ဆို အိပ်ယာကလည်း နိူးရောဒူးတွေ တေင် ချေင်တယ်ဗျာဒါကြောင့် ကိုယ်ဒူးကိုယ်ချွန်သူများဆိုပြီးပေ်ါလာတာ။တခု ပြောပြအုံးမယ် မိန်းကလေးတွေ ပီးသွားတဲ့ အခါ သူ့တို့ မျက်နှာလေး တွေက ချက်ခြင်း ချောင်ကြသွားတာနှစ်ခါလောက်ပြီးတဲ့ မိန်းကလေးဆို.သိပ်သိသာတယ်ကိုယ့်စော် ပြီးလား မပြီးလား သိချင်ရင်………… မချခင်နဲ့ ချပြီး သူ့မျက်နှာလေး ယှဉ်ကြည့်။၇ ခါမှ ဆယ်ခါလောက် ပြီးထားတဲ့ မရဲ့ မျက်နှာလေးဆို ချောင်ကြနေတာလေ။
မရေ ထတော့.ညနေ ဒင်နာ သွားရအုံးမယ်ဆိုပြီး နှစ်ယေက်သား နေ့လည်စာ သွားစား ပြီးတော့ အိမ်မှာ နားပြီး လေးနာရီလောက်ကျတော့ driver ကို ဖုန်း ခေါ်parkroyal ကို ပြန်ပြေးရတယ်။BOD အဖွဲ့က လူတွေကို ဒေါ်စောရီမှ မြန်မာစာ လိုက်ကျွေး တော်ကီဖုတ်ပြီး မနက်ဖြန် နေပြည်တော် ခရီး အတွက် ရှင်း ပြ။ အပြန်ကျ သူတို့ကို park royal ပြန်ပို့ပေးပြီးမနဲ့ ဈေးထွက်ဝယ် MK မှာ မ အတွက် one set လေးတွေ လိုက်ဝယ်ပေးတယ်။မိန်းကလေးတွေဟာ တကယ်ချစ်လာရင် ကျနော်တို့ထက် ပိုသတ္တိရှိတယ်။ အဝတ်လဲခန်း တံခါးလေး ဖွင့်ပြီး မောင် လှလားတဲ့ သုံးခါလောက် အဝလိုးပြီးမှ ကျနော့်ကို မောင်လို့ သူက စခေါ်တယ်….ဒါတာင် ပျော်နေလို့ သတိလက်လွတ်ဖြစ်ပြီး ခေါ်တာ ဖြစ်မယ်။သူတံခါးဖွင့်လိုက်တော့………. အပြင်ကလူတွေ လှမ်းမြင်နိုင်တယ်လေ ဒါပေမယ့် ဂရုမစိုက်ဘူးဗျာ လှတယ်မရေ ပြန်ပိတ်တော်ကြာ လူမြင်ကုန်အုံးမယ်ဆိုပြီး မနည်းပြန်ပိတ်ခိုင်းရတယ်။ အပြန်ကျတော့ သူ့ကို ပြန်ပို့ပေးပြီး အိနြ ရရ ပြန်လာရတယ်.။ ကိုယ်လည်း တကယ် မစွမ်းနိုင်တော့ဘူး ဆေးကောင်းချက်က အောက်က ကောင်က အခုထိ မာတောင်နေတုန်းဘဲ။ ချစ်လေးကို သတိရလို့ တော်ကီပွားလိုက်သေးတယ်သူလည်း သင်တန်းတွေတက်နေတာရယ်ရည်းစား အသစ်ရယ်နဲ့ ရှု့ပ်နေမှာ…..လို့ တွေးမိရင်း ပြုံးမိသွားသေးတယ်။
မ က အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတယ်ဆိုတာ…..ပိုပို သိလာရတာ လူသစ်တွေ ခန့်လိုက်တဲ့ အချိန်မှာဘဲကျနော်တို့ ရုံးက projects ရပြီဆိုတေ့ လူတွေ အများကြီး ခေါ်ရမှာလေ နေပြည်တော်က ပြန်လာကတည်းက အဲဒီကိစ္စ စီစဉ်နေရတာ……အရင်က တင်ထားတဲ့ CV ထဲက လူတွေကို အင်တာဗျူး ပြန်ခေါ်မလို့ လုပ်နေ တုန်းသူက လှမ်းနောက်တယ်မောင်ရေမလှတာဆို မ ဖယ်ထားလိုက်ပြိနော်တဲ့။ သူဘဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ စားရေးမလေးတွေ ခေါ်ပေးတယ် အင်ဂျင်နီယာ မ တွေ အများစုကတော့ သိပ်မလြှကြဘူးတစ်ယောက်ဘဲ…….တော်တော်လှတယ်အဲဒီတော်တော်လှတဲ့ ကောင်မလေးကတော့ ကျနော် ချက်ခြင်း ခန့်လိုက် တယ် အဲဒီလို ဘူးကျတာကျနော့်က သူ့ကို ခန့်တယ်ဆိုတာ ကွန်ဖန်းပေးတော့ မျက်နှာလေးမဲ့ပြီးဒီကောင်မလေးကို ကျတော့ ချက်ခြင်း ခန့်တယ်…..မကိုကျ တော့ နှစ်ခါတောင် ဗျူးတယ်တဲ့.ဆေးလိပ်လေးကိုင်ပြီး ကျနော့် နှာခေါင်းနား လာကပ်တယ်။ ချစ်စရာ ကောင်းတဲ့ မ အမူအရာမြင်တော့ညီလေးက မနေ နိုင်ဘူးမမောင့်ကိုစုပ်ပေးပါလား.နောက်တစ်ယောက် မဝင်ခင်.မြန်မြန်လေး ဆိုတော့လူဆိုးတဲ့ ပြောသာ ပြောတာ….ပါးစပ်က ဒစ်ကို ငုံထားပြီးသားအဲဒီ လောက် ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့မရဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ အပြုအစု အောက်မှ ကျနော့် သုတ်ရည်တွေ မရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို တဝြကီး ပန်းထုတ်လိုက်တယ်လုပ်ချင်တာ လုပ် ပြီးမှ အားနာသွားတယ် အလုပ်ချိန်ကြီးထဲမှာ မရဲ့ မျက်နှာလေးကို ကြည့်တော့ မူမပျက်လို့ တော်သေးတယ်လရည်လေးတွေကို လျှာနဲ့ ဝိုက်သိမ်းပြီး … ပါးစပ်လေးကို တစ်ရူးလေးနဲ့ ကာပြီး မ ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်သွားပြီး သွားဆေးရသေးတယ်။
ခဏနေတော့ သူပြန်ဝင်လာမှ အင်တာဗျူး ဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်။ညနေ သုံးနာရီကျော်တော့ ဒီနေ့ အတွက် သိမ်းပြီးလိုအပ်တာလေးတွေ ဆက်လုပ် မဆိုးဘူး အဲဒီနေ့က လူတော် ကောင်မလေးတွေ ၅ ယောက်လောက်နဲ့ အင်ဂျင်နီယာ သုံးယောက်လောက်ကို ဇကာတင် ရွေးခဲ့တယ်။ညနေကြတော့ ထုံးစံ အတိုင်း သူ့ ကို ပြန်ပို့ပေးပြီးကိုယ်က ပြန်လာ။ အလုပ်များနေတော့သူနဲ့ ကျနော်တောင် သိပ်မလုပ်ဖြစ်ကြဘူး။ရုံးမှာလည်း လူများလာပြီ ဆိုတော့ နည်းနည်း ဆင်ခြင်ရ တယ်။ဒါပေမယ့် မက ကျနော့် အတွက် အများကြီး စီစဉ်ထားတယ် ဆိုတာ သိရတဲ့ နေ့မ ကို ပိုချစ်မိလာတာပေါ့ဗျာ။ဖြစ်ပုံက ဒီလို။ထုံးစံ အတိုင်း သောကြာနေ့ ဆိုတော့လူတွေက အလုပ်လုပ်ရတာ သိပ်စိတ်မပါကြသလိုနားရက် အတွက် အစီအစဉ်တွေ ဆွဲနေကြတာပေါတနင်္လာကလည်း ရုံးပိတ်ရက် ဆိုတော့ သုံးရက် ပိတ်တယ်လေ။ မက ကျနော့်ကို လာပြောတယ် မောင်ရေ ဒီအပါတ် ချောင်းသာ သွားရအောင်လေတဲ့သူ့မိသားစုတွေကို ချောင်းသာကို လိုက်ပို့ပေးချင်လို့တဲ့။ကျနော်ကလည်း သိတဲ့ အတိုင်း မိသားစုနဲ့ ဆို မလွတ်လပ်မှာ စိုးလို့ မလိုက်တော့ဘူးဆိုတော့မက…..ကိုယ်တောချောစဉ်းစားနော်တဲ့ ရုံးက အလန်းလေး နှစ်ယောက်လည်း ပါမှာတဲ့ မက အကုန် စီစဉ်ပြီးသား သူတို့ အတွက် ဘန်ဂလို တစ်လုံး ကျနာ့် နဲ့ ရုံးက ကောင်မလေး နှစ်ယောက် အတွက် ဘန်ဂလို တစ်လုံး သုံးရက်ပိတ်လည်း ဖြစ် ခရီးသွားရာသီလည်း ဖြစ်တော့ အခန်းတွေ ကျပ်တာကို အကြောင်းပြပြီး သူက သေချာ စီစဉ်ပေးထား တာ။
ဒီလို နဲ့ ဒါဆိုလည်း မ သဘောဘဲ မောင်တော့ လိုက်ခဲ့မယ် တခန်းရရင် ထပ်ယူပေးပါအုံး မနဲ့ တူတူ ကဲရအောင်လေဆိုတော့ဗိုက်ခေါက်လိမ်ဆွဲတယ် အဲဒီနှစ် ယောက်ကို စားနေတဲ့ အချိန် မ ကို သတိရလိမ့်မယ် မထင်ဘူးတဲ့..။ ချောင်းသာကိုတော့ ကားစီးလုံး ဌားလိုက်တယ်ဒါမှ သွားချင်တဲ့ နေရာ သွားလို့ရမှာလေ မနက် အစောကြီး ထသွားတာ ဆိုတော့…………. ဟိုရောက်တော့ ဆယ်တစ်ဘဲ ရှိသေးတယ်။ အခန်း check in ဝင်ပြီး မက အခန်းကို လိုက်ပို့ပေးသေး တယ်။ ပြီးတော့ ဟို နှစ်ယောက်ကိုလည်း….ဒို့မန်နေဂျာကြီးကလည်း သောက်တတ်တယ်နော် နင်တို့ ဝိုင်းသောက်ပေးလိုက်အုံး သူ့ကိုပျော်အောင်ထား လိုက် ဒါမှ လစာတိုးမှာ ဆိုပြီး လှမ်းနောက်လိုက်ပြီး ခဏနေမှ အစ်မ ပြန်လာခဲ့မယ်တဲ့။ကျန်ာလည်း ကဲညီမတို့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် အဝတ်အစား လဲချင်လဲ ကြ အစ်ကိုလည်း စားစရာလေးစီစဉ်လိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီးလမ်းမဘက်ထွက်……….. ပင်လယ်စာ အစုံမှာ ဘီယာ ဝယ်ပြီး အခန်းထဲ ပြန်လာတော့ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်က အဝတ်အစားလဲပြီးပြီးဂါဝန်လေးတွေနဲ့ တစ်ယောက်က ဘောင်းဘီတောင် မဝတ်ထားဘူး။ ကျန်ာကြို့က်တဲ့ ကောင်မလေးက ခေတ်ဆန်တယ်.ရဲတင်းတယ်။ကဲလာ.စားကြ တစ်ယောက်က မ ကို သွားခေါ်ဆိုတော့ ….တစ်ယောက်က အလိုက် တသိ ထသွားတုန်းကဲညီမက အစားအသောက်ပြင်ကွာ ဆိုတော့ ထည့်စရာ ပန်းကန်မရှိဟိုတယ်ကို လှမ်းမှာနဲ့ ညီမ.ရေ နေရောင်ခြည်အောက်မှာ ညည်းက ပိုလှနေသလိုဘဲနော်ဆိုတော့ မသိသေးဘူးအစ်ကိုကလည်း.ဒီတိုင်းဆို မလှလို့လားဆိုတော့လှပါတယ် နေရောင်ခြည်ထိုးထားတော့ ပိုပြီး ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်ရတော့ ပေါ့ ဆိုမှ လူဆိုးကြီး ဆိုပြီး.လူကို လိုက်ရိုက်တယ်။
ဘောင်းဘီ ဝတ်လိုက်အုံးမယ်ဆိုတော့ဝတ်မနေပါနဲ့ကွာပြီးရင်လည်း ချွတ်ရအုံးမှာ ပူက ပူနဲ့ဒီတိုင်းလေးဘဲ လှပါတယ်ဆိုတော့သူမျက်နှာလေးက ရှက်သွေး ဖြာပြီး…. ချစ်စရာလေးဗျ သူက သက်မွန်မြင့်နဲ့ အတော်လေးကို ဆင်တာ ။အစ်ကိုလည်း လဲလိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး. ဘောင်းဘီရှည် ချွတ်ချ အတွင်းခံပါ ချွတ် ပြီး…..boxer လေး ဝတ်လိုက်တယ်။ ဒုတ်က ထောင်နေတော့ တန်းလန်းကြီးပေါ့ဗျာအပြင်ပြန်ထွက်တော့ သူက စိုက်ကြည့်ပြီး ရီနေတယ်။သေချာပါ တယ်.သူနဲ့ ကျနော် ဒီမှာ ဇတ်လမ်း ဖြစ်မယ် ဆိုတာဟိုတစ်ယောက်ရှေ့တော့ ဟန်ဆောင်နေမှ နောက်တစ်ယောက်က ရိုးရိုးအအ ပုံစံလေးသူ အရက်မူးမှ ကျွဲ ခိုးပေါ်မယ်လို့ မထင်ထားမိခင်ကပေါ့။ ခဏနေတော့ ပန်းကန်တွေလည်း ရောက်လာ…မတို့လည်း ရောက်လာလို့ သူ့ညီမကို ဟင်းပွဲတွေ ခွဲပေးပြီး သူတို့ မိသားစုနဲ့ တူတူ ပြန်စားခိုင်းလိုက်တယ်မရဲ့ ညီမကလည်း ဂါဝန် အပါးလေးနဲ့နေရောင်အောင်မှာ ကော့နေတဲ့ တင်လေးကို ငေးလိုက်သေးတယ်။ကဲ မစားခင် အမောပြေလေး ဆိုပြီး လေးယောက်သား ခွက်ကိုင် ဒီလိုနဲ့ သောက်လိုက် စားလိုက်ဟိုကောင်မလေးက တကယ့်အူရိုင်းကျနော့ ကောင်မလေးက အူ ယှဉ် သုံးခွက်လောက် ဝင်ပြီးတော့ ဟိုကောင်မလေးက စကား အတော်များနေပြီ လျှာကလည်း လေးလာတဲ့ အသံနဲ့ကျနော့်ကိုလည်း ကိုကို ဆိုပြီး ခေါ်နေပြီ ခွင်ကတော့ ဝင်ပြီ ကျနော်တို့ သုံးယောက်ကတော့ ဆက်သောက်နေတုန်း မက ဟဲကောင်မလေး နင် မသောက်နဲ့တော့ မူးပြီး အန်နေအုံးမယ် ဒို့ဂျာကြီး စိတ်ဆိုးသွားမယ်ဆိုတော့ရပါတယ် မရယ် ဂျာကြီးက သဘောကောင်းပါတယ် ဆို ပြောလည်း ပြော ခွက်လည်း မော့လိုက်သေးတယ်။ ထိုင်နေတာကလည်း အောက်စက လွတ်တော့အတွင်းက ပင်တီ အဖြူးလေးက ပေါ်နေပြီ…..သူ့အဖုတ်က သိပ်မဖောင်းဘူး။
သိပ်မကြာပါဘူး……ဆရာမ ငါးခွက် အယောက် မှောက်သွားတယ်အိပ်ချင်တယ်ဆိုပြီး ဝင်သွားတာ ပြန်ထွက်မလာတော့ဘူး သောက်ရင်း ပုလင်း ကုန်သွား လို့မက ထွက်ဝယ်ရင်ကြာနေမယ်..အခန်းထဲက ပုလင်း အရင်ယူလာမယ်ဆိုပြီးသွားယူပေးနေတုန်း ချစ်လေးနဲ့ ကျနော်ဘဲ ကျန်ခဲ့တာ သူ့နံမည်က ယု တဲ့.အပြည့်အစုံတော့ မပြောချင်ဘူး ယုလေး ဘယ်လိုလည်း ရသေးလားဆိုတော့ အိုကေပါတယ်တဲ့ ချစ်စရာ အမူအရာလေးနဲ့ခဏနေတော့ မ ပြန်လာတော့ ယုက အထဲဝင်သွားတုန်းမယုက အဆင်ပြေရဲ့လား ဆိုတော့မ သူ့ကို မေးကြည့်ပြီးပြီသူကလည်း လိင် ကိစ္စ စမ်းချင်နေတာတဲ့ မကို အဲဒီကိစ္စ အမြဲတမ်း ပြော တိုင်း မက ညွှန်းထားလို့ သူက သိပ်စမ်းချင်နေတာတဲ့။ မောင်လေးဆို ဒုတ်က အကြီးကြီး ဖြစ်နိုင်တယ် ဘာညာနဲ့ ဟာသတွေ ပြောပြီး စနေကြ ဆိုတော့ သူက သိပ်သိချင်နေတာ ဒါဆို သုံးယောက် တူတူ လုပ်မလား ဆိုတော့ အဲဒီလောက်ကြီးတော့ မဖြစ်သေးဘူးနဲ့ တူတယ်တဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ် အရင် လုပ်ပြီးမှ မကလည်းကွာ မောင်က အရမ်းဖီးလာနေပြီ ဒီမှာ ကြည့် ဆိုတော့ ကိုယ်တော် ဝရန်တာကြီးမှာနော်တဲ့.လူတွေလည်း မြင်သွားအုံးမယ် ဆြိုပြီးဒုတ်လေးကို ခ ပ်ဖွဖွလေးကိုင်ပြီး ဂွင်းတိုက်ပေးတယ်။ ပြောဖို့ မေ့နေလို့ မ ဝတ်ထားတာက ကြိုးတချောင်းနဲ့….အောက်က စကဒ် အတိုလေး အောက်ခံ ဘောင်းဘီလည်း မပါဘူး ။ ဒါနဲ့ သူ့ကိုလည်း ပြန်နိုက်ပေးလိုက်တယ်။ဆယ်မိနစ်လောက် နေမှ ယုက ထွက်လာတယ်.သေချာတယ်သူလည်း ဘရာချွတ်ခဲ့ပြီ ယုရေ ကြည့် လည်း လုပ်နော်တဲ့ဒို့ဂျာကြီး.ဘောင်းဘီလည်း ပေါက်ထွက်တော့မယ်ဆိုတော့ယုက ဟုတ်ပအစ်ကိုဟာကြီးကလည်း ထောင်နေလိုက်တာ…မနာဘူးလားတဲ့ နာတော့ နာတာပေါ့ဟ ချွတ်ထားလို့မှ မရတာ။ ပုဆိုးလည်း မဝတ်ချင်ဘူး မက ကဲဟာ ငါတော့အိပ်ချင်လာပြီ မနက်ကလည်း အစောကြီး ထလာရတာ ညနေရေထဲ ဆင်းအုံးမှာ ဆိုတော့ အားမွေးလိုက်အုံးမယ် ဆိုပြီး ပြန်သွားတယ်။
ကဲယုရေ.. ကိုယ်တို့လည်း သိမ်းရအေင် ဆိုပြီး အထဲဝင်တော့ ဟိုဆရာမက အထဲမှာ အိပ်တာ ပိုးလိုးပက်လက် တက်ပြီးတောင် စော်လိုက်ချင်သေးတယ်။ ဆရာ ဘယ်လိုလည်းတဲ့ ဖီးလ်တွေ စွတ်တက်နေပြီလားဆိုပြီး ယုက စတာနဲ့ ငါက နင်မြင်ကတည်းက ဖြစ်နေတာဒီမှာ ကြည့်ပြီး ဆိုပြီး ဘောင်းဘီ ချွတ်ပြ လိုက်တယ်။သူက ဟာ အကြီးကြီးဘဲ ဗွီဒီယိုတွေထဲက အတိုင်း ဆိုပြီး မျက်လုံးလေးပြူး ပြီး.လျှာလေး တစ်လစ်လေးနဲ့ ယု ကိုယ့်ကို ကူညီအုံးကွာ ဒါကြီးထ နေရင် အိပ်ပျော်မှ မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ဘယ်လို ကူညီရမယ် ဆိုတာ ရှင်းပြလိုက်တယ်နှစ်ယောက်သား ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ပြီး သူက ကိုယ့်ကို ဂွင်းထုပေးနေ တုန်း ယုကိုလည်း ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးသူ့အဖုတ်လေးကို ခပ်ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးပြီး ဖင်လေးကိ ညှစ်လိုက်နဲ့………. သူစိတ်ပါလာအောင် လုပ်ပေးလိုက် တယ်။ ပြီးတော့ယုပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးမယ်ကွာ ကုန်းခိုင်းလိုက်ပြီး ဂျာပေးလိုက်တယ် သူ့ဖင်လေးလေးက ဖွေးပြီး အမွှေးနုလေးတွေနဲ့ ဘေး နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေက နည်းနည်း တွဲနေပြီ ကျနော့် အကြိုက် အနေအထားရတော့ ကိုယ်မရတော့ဘူး ယုရယ်လိုးချင်နေပြီ ဆိုပြီ ဒုတ်ကို တေ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ သူက ပြန်ဆောင့်လိုက် ။ နောက်ကနေ …. နို့လေးတွေကို ဖက်ပြီး ဆွဲတာ doggy style နဲ့ နှစ်ယောက်သား ကောင်းနေပြီဆိုတော့ သူပြီးအောင် အစိလေးကို လှမ်းကလိပေးလိုက်တာ….သိပ်မြကြာဘူး ခဏလေးနဲ့ ပြီးသွားတယ်ကိုယ်လည်း မြန်မြန်ပြီးအောင် လုပ် ပြီး နှစ်ယောက် ရေတူတူ ချိုးလိုက်တယ် ရေချိုးနေတုန်း အသဲယားလာလို့ ထပ်ဂျာပေးပြီး သူ့ကို ချီပြီး အပြင်ထွက်လာတယ်အပြင်ရောက်တာနဲ့ သဘက် လေး နဲ့ သုတ်ပေးပြီး ခုတင်ပေါ် မှာ ပက်လက်လေး သူ့ကို ပေါင်တွေ ပုခုံးပေါ် စွဲတင်ပြီး…………ထပ်ဆွဲလိုက်သေးတယ် သူလည်း အောက်ပေးတော့ ကောင်းတယ်ဗျာ……လီးဝင်ကောင်းအောင် ပြင်ပေးပြီး အောက်က ပင့်ပင့်ပေးတယ်ဟိုစော်လေးကတော့ ဟောက်တောင် ဟောက်နေပြီ။
ကျနော်လည်း အပြင်မှာ တချီ ထပ်ပြီးအောင် လုပ်ပေးလိုက်ပြီးမှ ကဲ ကလေးရေ…အိပ်ကျရအောင် ဆိုပြီး ခုတင်ချင်း ချိန်းလိုက်ရတယ် ပင်ပန်းတာလည်း ပါ နှစ်ချီတောင် ဆွဲထားတာဆိုတော့အိပ်ပျော်သွားတယ်။အိပ်ယာက နိုးလာတော့ နာရီကောက်ကြည့်လိုက်တာ လေးနာရီကျော်နေပြီ ဘေးကို ကြည့်လိုက် တော့တစ်ယောက်မှ မရှိတာနဲ့အဝတ်အစားလဲ ရေကူးဘောင်းဘီလေး ဝတ်ပြီးကမ်းခြေဘက် ထွက်လာခဲ့ပြီး မကို လိုက်ရှာတယ်။ မ နဲ့ သူ့မိသားစုက ဓါတ် ပုံရိုက်နေတော့ ကျနော်လည်း အနားရောက်သွားရော အတော်ဘဲ အစ်ကို လာတာနဲ့….ဒီမှာ ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးပါအုံးတဲ့ဆိုပြီး မရဲ့ ညီမလေးက ဖုန်းလေး ထိုး ပေးလို့ သူတို့ကို ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးရင်း. .ငေးလိုက်တယ် မရဲ့ ညီမလေးက အတော်လေးကို တောင့်တာပါ တင်ကားကားလေးကိုလုံးဝန်းတဲ့ ဖင်လေးနဲ့ ကွပ် ထားတော့ တကယ့်ကို အနှစ်ဘဲ အနေတော် ရင်နှမွှာကလည်း ဘရာဇီယာကြားက ထိုးဖောက်တော့မယ့် အတိုင်း နေက ကျနေပြီ ဆိုတော့ပင်လယ်ဘက် ကျောပေးထားတဲ့ အတွက်.သူ့အတွင်းခံလေးကို ရေးတေးတေး လှမ်းမြင်ရတော့ ဒီကကောင်က ဒုက္ခပေးပြီလေ ရေကူးဘောင်းဘီအောက်မှ အတွင်းခံမှ မ ပါတာ ကိုယ်ဟာကြီးက ထိုးထိုးထောင်ထောင် ဖြစ်လာတပေါ့။ဟိုနှစ်ယောက်ကော မ ဆိုတော့ မက ရေစပ်ကို လက်ညိုးထိုးပြတယ် ကျနော်လည်း ရေကူး ချင်လို့ သွားလိုက်အုံးမယ်နော် မ ကော မဆင်းဘူးလား ဆိုတော့ ရေကြောက်တယ်တဲ့။ကျနော်လည်း ဟိုနှစ်ယောက် ရှိတဲ့ နေရာကို သွားပြီး ဟေ့ ရေထဲဆင်း ရအောင်လေဆိုတော့ရေမကူးတတ်ဘူးတဲ့ကျနော့် ချစ်လေးက တော့ သွားချင်ပုံဘဲအကြံထုတ်ရတယ်။
ကဲဒါဆို ငါလည်း နှစ်ယောက်တော့ တပြိုင်တည်း မထိန်းနိုင်ဘူး…တယောက်ချင်းဆီ ဆင်းကြဟာ…ဘောကိုင်ပြီး လိုက်ခဲ့ဆိုတော သူဇာက သူအရင် ဆင်း မယ်တဲ့ကျနော်တို့ ရုံးမှာက တကယ့် အချောအလှတွေချည်း ခန့်ထားတာ သူဇာက လည်း တောင့်တောင့်ဖြောင့်ဖြောင့် သူ့ဝတ်ထားတဲ့ စကဒ်လေးကလည်း တိုတိုလေး အပေါ်က တီရှပ် အဖြူရောင်အောက်က ဘရာ ပန်းရောင်လေးအောက်မှာ ပုန်းနေတဲ့စနေနှစ်ခိုင်ကို စိတ်ထဲက မှန်းကိုင်ကြည့်တယ်.။ သူဇာကို ဘော ပေါ် တင်ပြီး ရေ နည်းနည်း နက်တဲ့ နေရာထိ တွန်းသွားပေးလိုက်တယ်။ ရေနက်မှ လူလည်း ရှင်းတာလေ လူအများစုက ကမ်းခြေနားမှာဘဲ ဆော့ကြ တာကိုး ရေနက်ရောက်တော့ပက်လက်လေး ဖြစ်နေတဲ့ သူဇာကို စလိုက်တယ် ငါထားခဲ့မယ်နော်.နောက်တစ်ယောက် သွားခေါ်လိုက်အုံးမယ် ဆိုတော့ အကြောက်တလန့်နဲ့ မလုပ်ပါနဲ့ အစ်ကိုရယ်တဲ့.ညီမ တကယ် ကြောက်လို့ပါတဲ့အလကားစတာပါ ဟာ ဆိုပြီး ပါးလေး ဆွဲညှစ်လိုက်တယ်။ ကမ်းခြေက ကျ နော်တို့ကို သေချာ မမြင်ရလောက်တော့ဘူး ဒါနဲ့ သူဇာကို သေချာ ထိန်းထားနော်.လှိုင်းစီးရအောင် ဆိုသူ့ဘောကွင်းကို အသာလေး ခိုထားလိုက်တယ် အနီးကပ် ကြည့်မှ….. သူ့ နို့လေးတွေက ပိုပြီး စို့ချင်စရာ ကောင်းလာသလိုဘဲ ဒါနဲ့ လှိုင်းခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး လာတော့ .ချောလှဲရောထိုင်းပြီး. သူ့ပေါင်ကြား ထဲ ခေါင်းဝင်လိုက်တယ်။ အစ်ကိုကလည်း ငရဲကြီးပါအုံးမယ် ကန်တော့နော်တဲ့ ရပါတယ်ကွာ ဆိုပြီး.ညည်း အသားလေးတွေက အိနေတာဘဲ ပေါင်လေး ပေါ် ခေါင်းအုန်းပြီး အိပ်လိုက်ရရင်တော့ ဇိမ်ဘဲ ဆိုတော့ သူ စဉ်းစားနေပုံရတယ် လက်တဖက်ကလည်း ပြောရင်းနဲ့ ပေါင်လေးတွေကို မသိမသာလေး ပွတ် ပေးလိုက်တယ်။သူ့ပေါင်လေး ဖြေးဖြေးချင်း ကားလာတော့လှိုင်း အလှုပ်မှာ အဖုတ်လေးပေါ် လက်တင်လိုက်တယ်သူလည်း ကြည့်ရတာ အရသာ တွေ့နေပုံ ပေါ်တာနဲ့ စကဒ်အောက်ထဲ လက်ထည့်ပြီး ပင်တီလေးပေါ်က နေ ဖြေးဖြေး ချင်း ပွတ်ပေးလိုက်တယ်။
သူဇာက ခုမှ သေချာကြည့်မိတယ် တကယ့်မင်းသမီးလေးလိုဘဲနော် အသားကလည်း ညိုတာညိုတာ ချောမွတ်နေတာဘဲ ဆိုတော့ အစ်ကိုက ဘယ်ကြည့် မှာလည်း သဉ္ဖာနဲ့ အစ်မကိုဘဲ ငမ်းနေတာကိုးတဲ့ ……စိတ်ဆိုးတဲ့ လေသံလေးနဲ့ ဟုတ်ပါဘူးကွာ အစ်ကို အလုပ်များတာလည်း သိရဲ့သားနဲ့ ကဲပါ …ကိုယ် လည်း စိတ်ပါလာပြီ သူဇာရယ် ကိုင်ကြည့်မယ်နော် ဆိုပြီး ခါးကို နည်းနည်း မ ခိုင်းပြီး ဘောအောက်ကနေ အဖုတ်လေးကို အားရပါးက ပွတ်ပေးလိုက် ဆား ငန်ရေနဲ့ ဆိုတော့ အဖုတ်လေးက အချွဲဓါတ်က ခဏလေး ပျောက်ပျောက်သွားတယ်။ ညကျမှ ကိုယ် အ၀ ပြုစုပေးတော့မယ်ကွာ အခု သန္တာကို သွားခေါ် လိုက်အုံးမယ် ဆိုပြီး ။ကမ်းခြေဘက် ဆွဲ သန္တာနဲ့ကတော့ တကြိမ် စားပြီးသား ဆိုတော့ကစ်ဆင်လေး ဘာလေး ဆွဲပြီး နည်းနည် ဆော့ပေးလိုက်တယ်… ကဲ ဟာ ငါ.ပင်ပန်းပြီ သွားနားလိုက်အုံးမယ်.ရေကူးကန်ကိုလိုက်လာခဲ့ဆိုပြီး ထွက်လာခဲ့တယ်။အပြင်ရေပန်းမှာ ရေချိုးပြီး……ရေကူးကန်ထဲ ဆင်းဘီယာ နဲ့ အားလုံးကြော် မှာပြီး စိမ်နေလိုက်တယ်။ ခဏနေတော့ မ ရယ် သူ့ညီမရယ်ကောင်မလေး နှစ်ယောက်.လေးယောက်သား လိုက်လာကြတယ်။ ကျနော်က ဘီယာသောက်တော့သူတို့ကလည်း သောက်ချင်တယ် ဆိုလို့ ကန်ဘေးမှာ ပုလင်းထောင်ပေးလိုက်တယ်။သူတို့ကတော့ ရေထဲ ဆင်းချင်ပေမယ့် ရေကူး ဝတ်စုံ မပါလို့ ဆင်းလို့ မရဘူးသူတို့က အကျီအဖြူဘဲ ခွင့်ပြုတာလေ။မရေ ညဘက် ဘာအစီအစဉ်ရှိလည်း ဆိုတော့ကမ်းခြေမှာ ထွက်သောက်ကြမယ်တဲ့ စားစရာတော့ အပြင်ကဘဲ မှာပြီး စားကြတာပေါ့ ဆိုတော့ မချောလေးယောက် ကိုယ်တစ်ယောက်ဒီည ကမ်းခြေဘက်ကို ထွက်လာခဲ့တယ်။
ဂီတာလည်း မပါတော့ ဖုန်းနဲ့သီချင်းလေး ဖွင့်ပြီး နားထောင်ရင်း အာလူးဖုတ်ပေါ့ညဘက် ကိုးနာရီလောက်ကြတော့ခဏလေး toilet သွားချင်လို့ ဆို…အခန်း ပြန်မယ့် ပုံစံနဲ့ မကို မျက်နှာရိပ် မျက်နှာကဲ ပြလိုက်တယ် မ က ဟယ်ငါလည်း အမေတို့ အခြေအနေသွားကြည့်အုံးမှ သူတို့ အိပ်ချင် အိပ်ဆိုပြီး သွားပြော လိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး လိုက်လာခဲ့တယ်။ မ အမေတို့ကို ပြောပြီး မြန်မြန်လာခဲ့နော် အခန်းထဲက စောင့်နေမယ်ဆိုသူ့ကို ပြောပြီး အခန်းထဲမှာ အဆင်သင့်စောင့် နေလိုက်တယ်။ ဘယ်သူတွေကိုဘဲ လုပ်ရ လုပ်ရ မကို တော့ လုပ်ချင်နေတုန်းဘဲ မလည်း အခန်းတခါးဖွင့်ရော ချက်ခြင်း..သူ့ကို ဖက် ခုတင်ပေါ် ပက်လက် လှန်ပြီး ဂျာပေးလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ တချီကောင်း အားရပါးရ လိုးပေးလိုက်တယ်။ မ”နဲ့က ခိုးလုပ်ဖို့ မလွယ်ဘူး သူက အရမ်းကောင်းလေး ပိုအော်လေဘဲ ဒါကြောင့် ခိုးစားရတာ လူအတော်ရှင်းမှ အဆင်ပြေတာ။လုပ်နေကြဆိုတော့ တစ်ယောက် အကြိုက် တစ်ယောက်သိပြီးသားလေ ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် ကြာတော့ တူတူ ပြီးလိုက်ပြီးကမ်းခြေဘက် ပြန်လာခဲ့တယ်။ဒီညက သူ့ဇာကို လုပ်ချင်တာ ဆိုတော့ သန္တာကို မူးအောင် တိုက်ရမယ်ဆိုမှ သန္တာကလည်း တ ကယ့် ကြွက်တွင်းဘီယာ တကဒ်သာ ကုန်သွားတယ် သူက အေးဆေး မကလည်း သောက်နိုင်တယ်။ မရဲ့ ညီမနဲ့ သူဇာသာ သိပ်မသောက်ကြတာ ကျနော်တို့ သုံးယောက်က အရမ်း သောက်နိုင်တယ် ကဲ ညီမလေးနဲ့ သူဇာ ဟိုတယ်က တစ်ယောက်ယောက်ကို ဘီယာ သွားဝယ်ခိုင်းလိုက်ဟာ အခန်းထဲမှာ အစ်ကို ပိုက်ဆံအိတ်ရှိတယ်ဆို သော့ပေးပြီး ခိုင်းလိုက်တယ် သူ့တို့ နှစ်ယောက် ထွက်သွားမှ ဘယ်လိုလည်း ဆရာလေး နေ့လည်က အရမ်းကောင်းလား မကို သန္တာ ပြောပြလို့ အားလုံးသီပြီးသားတဲ့ဟာကျနော်တောင် ရှက်သွားတယ်။
သန္တာကတော့ ပြုံးစိစိနဲ့ ကျမတို့ ဆရာက အလုပ်လုပ်တာတင် တော်တာ မဟုတ်ဘူး ဒီကိစ္စလည်း ဆရာကြီးဘဲ သန္တာကတော့သဘောကျတယ်ဆိုဘဲ။ဒီလို လုပ်ပါလား2in 1 စမ်းကြည့်ရအောင် ဆိုတော့ အားလုံးက ကောင်းနေပြီသားဆိုတော့ အိုကေပေါ့ ခက်တာက တစ်ယောက်ယောက် အိပ်မှ ဖြစ်မှာလေဒါမှ မဟုတ် ကမ်းခြေမှာ ထွက်လုပ်ကြမလား ဆိုတော့လည်း မဖြစ်ဘူး မရဲ့ အော်သံ အကြောင်း ကျနော် ကောင်းကောင်းသိတယ်။ ဒါဆို မနက်ဖြန် စီစဉ်လိုက် မယ် သူဇာရယ် ညီမတို့ မိသားစုရယ်ကို ကားနဲ့ ငွေဆောင်ဘက် ခေါ်သွားခိုင်းပြီး ငါတို့ သုံးယောက်နေခဲ့လိုက်မယ်ဆိုပြီး .မ”က အကြံပေးတော့ အိုကေပေါ့။ ဒီလိုနဲ့ ဆက်သောက်ကြတာ တိုက်ပွဲ အရင်ဆုံး ကျသွားတာက မ သူတိုက်ပွဲကျသွားတော့သုံးဗူးဘဲ ကျန်တော့တယ်။ကဲ သန္တာရေ ကိုယ်တို့ ဒါလေး ဖြတ် လိုက်ရအောင် ဆိုပြီးသူ့ကို အတင်း ထိုးတိုက်လိုက်တယ်။ ဘယ်ခံနိုင်မှာလည်းဗျာ ကိုယ်တောင် အတော်လေးကောင်းနေပြီ မမူးတာဆိုလို့ မရဲ့ ညီမလေးးဘဲ ရှိတော့တယ်။ကဲ ပြန်ကြရအောင် ဆိုပြီး မ”ကိုတဖက်စီ တွဲပြီး……..အခန်းပြန်ပို့ အထဲရောက်တော့.အဝတ်လဲမယ်ဆိုပြီး သန္တာက အကုန်ချွတ်ချလို့သူဇာက ကွယ်ပေးထားတယ်ကိုယ်လည်း မသိချင်ယောင် ဆောင် အပြင်ခဏထွက်နေပေးလိုက်တယ် ပြန်ဝင်လာတော့ သန္တာက ညအိပ်ဝတ်စုံလေး သူဇာက ရေချိုးခန်းထဲ အဝတ်အစားဝင်လဲနေပုံရတယ်။
good night သန္တာ အိပ်တော့ နော်ဆိုပြီး …….သူ့နဖူးလေး နမ်းပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ တိုးတိုးလေး အားမွေးထားဆိုပြီး ပါးလေး ညှစ်ပြောပြီး ကိုယ်လည် အဝတ်အစား လဲလိုက်တယ်။ခဏနေတော့သူဇာက ဟိုတယ်က ညအိပ်ဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီး ပြန်ထွက်လာတယ် သူဇာတော့ မအိပ်ချင်သေးဘူးအပြင်ခဏ ထွက်ထိုင်အုံးမယ်ဆိုတောက…….ကိုယ်ကလည်း အိုကေပေါ့အပြင်မှာ နှစ်ယောက်သား လေကန်ရင်းက အေးလာလို့ ဆိုပြီး သူ့ကို ဖက်ထားရတယ်..။ သူ ဇာ့ကို ဖက်ထားရင်းက ကျနော်လက်တွေက အလိုက်တသိ……. လုပ်ရှားပေးလိုက်တယ်။ အကျီပေါ်ကနေ နို့လေးကို ဆုပ်နယ်ပေးလိုက်ပြီး….နှုတ်ခမ်းလေး ကို နမ်း……. ဖီးလ်ဝင်လာတော့မှာ အောက်ဘက်ကို ဆင်းပြီး အဖုတ်လေးကို ကိုင်ကြည့်တော့သူ့က အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဆိုာတာ သိလိုက်ရတယ်။အထဲ လည်း မဝင်ချင်တာနဲ့အပြင်မှာဘဲ ဆွဲဖို့ စဉ်းစားထားတာ တခါမှလည်း လူမြင်ကွင်းမှာ မလုပ်ဘူးတော့ စမ်းကြည့်ချင်နေတာ။ ဒါနဲ့ သူ့ကို ဆွဲညှိလိုက်တယ် အထဲမှာလူရှိတော့ အပြင်မှာဘဲ ဆွဲရအောင်ကွာဆိုတော့အစ်ကိုကလည်း ရှက်စရာကြီးတဲ့သူ့ငြင်းသံက အားပျော့နေတော့ ထိုင်ခုံပေါ်ကနေ အောက်ကို ဆင်းပြီး သူ့ကို အပေါ်တက်ထိုင်ခိုင်းလိုက်တယ် သူ့အဖုတ်လေးက ချောဆီတွေကြောင့်ဒစ်ကြီးက အဖုတ်လေးထဲကို အသာလေး ဝင်သွားတာ နည်းနည်းချင်း နဲ့လိုက် သူက ဇကောဝိုင်းလိုက်နဲ့ကျနော်လည်း အောက်က အသာလေး အလိုက်သင့်နေပေးလိုက်တယ်။သူလည်း မလုပ်ရတာ ကြာလို့ ဖြစ် မယ်ခဏလေး ပြီးသွားတယ်။
ဆံပင်ကို လက်မောင်းကို ကုတ်ပြီး အားယူလိုက်ကတည်းက သဘောက်ပေါက်လိုက်ပြီ။ဒါနဲ့ ခဏလေး မှိန်းထားပြီး သူ့ကို နမ်းလိုက်ဟိုပွတ်သည်ပွတ်လိုက် နဲ့ ဖီးလ်ပြန်သွင်းပေးတယ် ပြီးတော့ သူ့ကို ပက်လက်လှန်ခိုင်းပြီး လှေကြီးထိုး ရိုးရိုးလေး လိုးရင်းက အားမရတော့ဘူးဗျာပတ်ဝန်းကျင်လည်း ဂရုမစိုက် တော့ဝရံတာကို လက်ကိုင်ခိုင်းပြီးကုန်းခိုင်းလိုက်တယ်။ သူ့ဂါဝန်လေးကို မပြီး.နောက်ကနေ ကစ်တာ ကေငာ်ားလိုက်တာဗျာ စီးနေတာဘဲ သူ့ဖင်ကြီးက အားမလို အားမရနဲ့ ပြန်ပြန်ဆောင့်တာများအသံတောင် ထွက်တယ်။ပြီးသွားတော့ နှစ်ယောက်သား အထဲဝင် ရေချိုးခန်းထဲ ဝင်ပြီး သူ့အဖုတ်လေးကို ရေဆေးပေးလိုက်တော့သူက အစ်ကိုက အရမ်း နူးညံ့တာဘဲနော်တဲ့အဲဒီလို ပြောမှတော့ကိုယ်ကလည်း..ဘယ်နေနိုင်မှာလည်း……….ပို အစွမ်းပြရတာပေါ့ ဂျာပေးလိုက်တာ လူးနေတာဘဲအစ်ကိုကိုလည်း ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့ သူ့ပြုစုတာ ခံလိုက်တယ်။ သူ့လျှာစွမ်းလည်း မသေးဘူးးဗျာဒစ်လေးကို လျှာလေး နဲ့ လျှက်တာများ ကောင်းလိုက်တာဗျာ။ပြီးတော့ ဒုတ်ကို အားမလို အားမရ ကိုင်ပြီး ထုလိုက် ပါးစပ်လေးနဲ့ ငုံလိုက် အရမ်းကောင်းနေတော့ ပြီးသွားမှာ စိုး တာနဲ့သူ့ကို ချီလိုက်ပြီး ဘေစင်ပေါ်ကို တင်ပြူးထွက်နေတဲ့အဖုတ်လေးက လိုးချင်စရာလေးဗျာ ထူးခြားတာ တခုက……သူ့အမွှေးလေးတွေက အတော် နူးညံ့သေးတယ်။ ဒါနဲ့ကိုယ်လည်း သိပ်မစဉ်းစားတော့ဘူး ဒစ်ကို အဖုတ်ထဲ ထည့်သွင်းလိုက်တယ်လည်ပင်းလေးကို နမ်းပြီး……. နားရွက်လေးတွေ စုပ် ပေးလိုက်……ဆိုတော့ သူလည်း အရမ်းကောင်းနေပုံရတယ်ဆောင့်ဆောင့် …..မြန်မြန်ဆောင့် ဆိုတာနဲ့.စောင့်လိုက်တာအဖုတ်နဲ့ ဘောရိုက်သံ တပျက်ပျက် က အကျယ်ကြီးဘဲ…..တော်သေးတယ်အပြင်ကလူ မနိုးလို့။
သူပြီးလို့ သိပ်မကြာဘူး ကျနော်လည်း လိုက်ပြီးပေးလိုက်တယ် နောက် နှစ်ယောက်သား သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရင်း အိပ်ယာပေါ် ကိုယ်စီတက်လိုက်ကြတယ်။ ထပ်လုပ်ချင်သေးပေမယ့် သုံးယောက် တစ်ယောက်ဆိုတော့ တကယ်လည်း သုတ်ရည်က ကျဲနေပါပြီ။မနက်ခင်း အိပ်ယာက နိူးတော့ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ ဘူး..နာရီကြည့်တော့ ၉ နာရီခွဲနေပြီ။ ဒါနဲ့ မတို့ အခန်းဘက်ကို သွားကြည့်လိုက်တယ်…..အသံတော့ မကြားရ. တခါးလေးကို တွန်းဖွင့်လိုက်တာအားပါးပါး တမင်ကြံစည်ရင်တောင် ဒီလို မြင်ကွင်းမျိုး တွေ့ရမှာ မဟုတ်ဘူးဗျာ။မရဲ့ ညီမလေးအဝတ်အစားလဲနေတာ ဘယ်သူမှ မရှိတော့ကိုယ်လုံးတီးလေးနဲ့အတွင်းခံ လဲနေပုံလေးက အခုထိ မျက်စိထဲက မထွက်သေးဘူးဖင်နှစ်လုံးကြားက နောက်ကို ပြူးထွက်နေတဲ့ အဖုတ်လေး အတွင်းသားလေးတွေကရဲနေတာဘဲဗျာ သူ့တင်ပါးမှဲ့လေးလည်း ရှိသေးတယ်။ ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့လည်း မထိန်းနိုင်တော့ဘူးဗျာ သူ့ကို နောက်က ဖက်ပြီး လည်ပင်းလေးကို နမ်းလိုက်တယ် ချစ်မိသွား ပြီကလေးရယ် ကိုကို တကယ် မထိန်းနိုင်တော့ဘူး ချစ်ခွင့်ပေးပါနောက်ဆိုပြီးစကားလည်းပြော နို့အုံလေးလည်း ပွတ်ပေး ပြီးတော့ ခုဏကလို ပြန်ကုန်းခိုင်း ပြီး.စောက်ဖုတ်လေးကို အားရပါးရ ယက်ပေးလိုက်တယ်သေချာတယ်ဗျာသူ့မှာ အတွေ့အကြုံသိပ်မရှိသေးဘူးစောက်ဖုတ်ယက်တာတောင် ကောင်မလေး က မခံနိုင်ဘူး ဒူးလေးတွေ ကွေးကျလာတယ်။
အချိန်လည်း သိပ်မရတော့ကုတင်ကို လက်ထောက်ခိုင်းပြီး………… နောက်က ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းပေးမလို့ဘဲ။စော်ကဘဲ ကြပ်တာလား..ဇောကဘဲ ထန် နေလို့လား မသိဘူး.တော်တော်နဲ့ မဝင်ဘူးဗျာပက်လက် ပြန်လန်ခိုင်းပြီး……..လက်ညိုးနဲ့ အရင် လိုးပေးလိုက်တယ်.ပြီးမှာ လက်ခလယ် အကူညီပါ ယူပြီး ဖြေးဖြေးချင်း မွှေ့ပေးလိုက်တယ်ထွက်ကျလာတဲ့ အရည်တွေ…နည်းတာ မဟုတ်ဘူးဗျာ။ ခဏနေမှ ခေါင်းလေးတေ့ပြီး ဖြေးဖြေးချင်း သွင်းပေးလိုက် တယ် သူ့ရဲ့ နူးညံ့တဲ့ အမိန့်တော် အတိုင်းဘဲ ကိုယ်လည်း မကြမ်းရက်ဘူး ဖြေးဖြေးချင်း မှေးလိုးပေးလိုက်တယ် သူက ကောင်းလွန်းရင် အံကြိတ်ပြီး ညည်း တယ်ဗျာ တကယ်ပါ အခုထိ ဒီမြင်ကွင်းလေး မှတ်မိနေသေးတယ်။ လိုးလို့တော်တော်ကို ကောင်းတာပါ အချိန်လည်း သိပ်မရတော့လို့ လုပ်ရှားပေးလိုက် တယ် သူလည်း နောက်တချီပြီးတော့မယ့် ပုံစံဘဲ လက်မောင်းတွေကိုနည်းနည်းမြန်မြန်လေး အသားကုန်ဆွဲကုတ်နေတယ်ကိုယ်လည်း သူ့နဲ့ အပြိုင် ခပ်ပြင်း ပြင်းနဲ့ ခပ်သွက်သွက်လေးလုပ်ရှားပြီးပွဲသိမ်းလိုက်တယ်
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ကြှနျတေျာ့ခဈြသူအတှငျးရေးမှူးမမ